Leadership Skills by peter kyaw - issuu
ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည် ကျနော်တို့ပြောနေတာဟာ တိကျတဲ့အစိပ္ပါယ်က ဘာကိုဆိုလိုသလဲ။
ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ လက်နက်များဖြစ်သော လုပ်နိုင်စွမ်းရည်များ နှင့် အပြုအမှုများဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းဟာ
လူတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့ အခြားလူတွေကို လိုအပ်သောနိုးဆော်ခြင်း နှင့် လမ်းညွနန
်ိူင်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာများအားဖြင့်အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်များဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ဒီစာအုပ်ဟာ သင့်ကို အချက်အလက်များ သင့်ရဲ့ဆောင်မှုစွမ်းရည်များကို စတင်တည်ဆောက်ဖို့
ချက်ချင်းကူညီလိမ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ် ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သင့်အတွက် တိကျသောလက်နက်
ကရိယာများ နှင့် အချက်အလက်များကို တစ်စုံတစ်ရာ အသုံးပြုနိုင်လိမ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အကယ်၍
သင်လိုက်လုပ်မယ်ဆိုလျင် အံ့သြလောက်အောင် မင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်များ လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုကို
တွေ့ရလိမ်မယ်။ ခြားနားသော မင်းတုံပြန်မှုများကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စတင်တွေ့ရလိမ်မယ်။ အခြားလူများ
ိုိုယ်ပိုင်အောင်မြင်ရန်မင်းတစ်ကယ်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပို၍ပျော်ရွမှုရှိလာနိုင်တာကို မင်းတွေ့ရလိမ်မယ်။ဒီဦးဆောင်မှုစွမ်းရည် သို့မဟုတ် အရည်အခင်းများဟာ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတစ်ခုတည်း အသုံးပြုဖို့
လေ့လာသင်ယူတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ဘ၀နယ်ပယ်မဆိုပို၍အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိအောင်ခေါင်းဆောင်မှုမှာ ကူညီဖို့ ထင်မြင်ယူဆချက်များစွာကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတစ်ဦးကဲ့သို့ ၊
ဘောလုံးနည်းပြတစ်ဦးကဲ့သို့ ၊ ဒါနအဖွဲ့ ၀င်တစ်ဦးကဲ့သို့ သို့မဟုတ် ဘယ်ခေါင်းဆောင်အမျိုးအစားမဆို ဒီက
မင်းကိုကူညီနိုင်သောအချက်အလက်များ နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချက်စွာ အောင်မြင်သော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ကဲ့သို့
1.1What are leadership skills?
1.2 A born leader2. Three traits every successful leader must have
2.3 What's the Difference betweenamission statement andavision statement?
2.3.3 Substance3. Understanding Your Role: Leading Vs. Managing
3.1 Differentiating Between Management Skills and Leadership Skills
3.3 How your personality style affects your ability4. How your personality style affects your ability to lead
4.3 The Platinum Rule5. Leadership styles
5.3.4 When to Use it5.4 Bureaucratic Leadership Style
5.4.4 When to Use it5.5 The charimatic Leadership style
5.5.4 When to Use it6. Leading the team
6.1.2 Creating the team purpose statement6.2 Forming, Storming, Norming, Performing
6.2.2 Forming6.2.3 Storming
6.2.6 Adjourning or Mourning Phase
7.3 When delegating Does and Doesnâ&#x20AC;&#x2122;t Work
7.5 How to delegate successfully8. Moentoring others
9. ResourcesWhat Are Leadership Skills? (ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်များဟာ ဘာလဲ။)
ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကျနော်တို့ပြောနေတာဟာတိကျတဲ့အစိပ္ပါယ်ကဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ လက်နက်များဖြစ်သော လုပ်နိုင်စွမ်းရည်များ နှင့် အပြုအမှုများဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းဟာ
လူတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့ အခြားလူတွေကို လိုအပ်သောနိုးဆော်ခြင်း နှင့် လမ်းညွန်နိူင်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ို ရည်အချင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အာများအားဖြင့်အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်များဟာ သူတ့က
ိုိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်ကြတယ်။2.1 A Born Leader? (ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဘယ်လို မွေးဖွားမလဲ)
သင်အမှန်တကယ်ကြားဖူးကြ မှာပါ။ မင်းတို့ကြားဖူးတာကို ဘယ်သူ တွေများဖြစ်မယ်ထင် ပါလဲ။ Martin
Luther King, Mahatma Ghandi, သို့ အခြားကမ္ဘာ့ကျော်ကြားသော ကမ္ဘာ့ သမိုင်းခေါင်းဆောင်များတွေလား။
ိုိုခေါင်းဆောင်မှု အကျိုးထရောက်စေသောအရာက အောက်မှာ အနည်းငယ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။•ခိုင်မာသော မျော်မုန်းချက် နှင့် ပန်းတိုင် တစ်ခုရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။•သူ/သူမ တို့၏ အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။•သူတို့ ရိုးသားမှု/ ကြိုးစားမှုကို ပြသနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။•အခြားလူတွေကို ဥပမာတခုကို တည်ခင်းနိုင် လို့ဖြစ်ပါတယ်။•အခြားလူတွေကို ဘယ်လိုပြုမှု ၊ ဘယ်လို နိုးဆော်ရမလဲဆိုတာကို
နားလည်သဘောပေါက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။•အခြားသူများတွေကို ထိထိရောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။•အခက်အခဲများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းသော ဆန္ဒရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။•ပြသာနာကို စွမ်းကျင်စွာဖြေရှင်း နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဌင်းအချက်များ သင်ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မရှိသေးဘူးဆိုလျှင် သူတ့က
ိုို သင်ယူနိုင်ပါတယ်။စေလဲ။2. Three Traits Every Successful Leader Must Have
(အောင်မြင်သော ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ ပင်ကိုယ်စရိုက် သုံးချက် ရှိရမည်။)
ဌင်းထူးခြားသော ပင်ကိုစရိုက် သုံးချက်ဟာ ခေါင်းဆောင်တိုင်း ရှိသင့်ပါတယ်။ သူတို့မရှိဘူးဆိုရင်
ဦးဆောင်မှုကို အကျိုးတက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ဘူး။
ွ်နိုင်မှုက သင်ကိုအလွနပ
် င်လောင်စွမ်း စေလိမ်မည်။•သင်၏အဖွဲ့က သူတို့အလုပ် လုံးလုံးလျားလျား ကျဆုံးလိမ်မည်။•မင်း၏ အဖွဲ့သားတွေက မင်းကိုထွက်ခွာသွား ကျလိမ်မည်။•မင်း၏အဖွဲ့ သားတွေက မင်းကိုရှိသေမှု ဆုံးရှုံးလိမ်မည်။ဘာကြောင့် ဌင်း ပင်ကိုယ်စရိုက် သုံးချက်က လိုအပ်သလဲ။ ပထမဆုံး ပင်ကိုယ်စရိုက်
ကတော့ဦးဆောင်မှု ဆန္ဒရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အဲသလို မရင်ဆိုင်ရဘူးဆိုလျှင် ဘယ်တော့အခါမှခေါင်းဆာင်မှု ကဏ္ဍမှာ သင်ဟာ သက်ထောင့်သက်သာ ရလိမ်မည်မဟုတ်ဘူး။ အောက်ခြေကနေ
သင်ရက်တိုင်းစွန့်စားရလိမ်မည်။မင်းလုပ်သမျှအရာအားလုံးတွေကသင်၏အသင်းသားတွေဟာမင်းကိုစောင့်ကြည့်နေလိမ်မည်။ အကယ်၍ မင်းခွန်အား စိုက်ထုတ်ထုတ်မှုမရှဘ
ိူးဆိုရင် အလုပ်တွေက
ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ မင်းအဖွဲ့ တွေ ပျက်ပြားသွားလိမ်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ မင်းမရှိတော့
ို အလုပ်ကို သူတို့မလုပ်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်အရင်ဦးဆုံးမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဆိုလျှင်
ဒုတိယအချက်ပင်ကိုယ်စရိုက်ဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာဘယ်နေရာမှာသူတို့လုပ်ရင်အောင်မြင်မလဲ ဆိုတာ သီးခြားသောအမြင်ရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခြားသူများ
မယုံကြည်နိုင်တာကိုသူတို့တစ်စုံတစ်ခုကောင်းကောင်းအလုပ်ပြီးမြောက်အောင်သိမ်းသွင်းစည်းရုံးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းခက်ခဲသော အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အမြင် တွေကို
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ပြောင်းလဲလာအောင် ဦးဆောင်နိုင်တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံနိုင်လောက်အောင်
ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလိုလုပ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။နောက်ဆုံးပင်ကိုယ်စရိုက်ကတော့ရိုးသားမှုဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ ရိုးသားမှုရှိရမည်။ ရိုးသားမှုဆိုတာ အစိပ္ပါယ်က ရိုးရှင်းပါတယ်။ မင်းပြောသလို
မင်းလုပ်ရမယ်။ အဖွဲ့၏ မင်းကိုမျော်လင့် သလိုမင်း လုပ်ဆောင်ရလိမ်မည်။ ဖျက်ကနဲ့ကြည့် လိုက်လျှင်
ရိုးသားမှုဟာ ဟုတ်သလိုလို ထင်နေရတယ်။ သို့သော် စစ်မုန်သောရိုးသားမှု ဖြစ်ဖို့တော်တော်ကြိုးစား
ဲ ည်းတစ်ခုလုံးပိုကောင်းမွန်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်လိမ်မည်။2.1 The Desire to Lead (ဦးဆောင်မှုရှိသော ဆန္ဒ)
ဘယ်အလုပ်မဆို လုပ်တဲ့အခါမှာ ခက်ခမ
ှဲုနြဲ့ ကုံတွေ့ရကြပါတယ်။
စသည်ဖြင့်ကြုံတွေ့နေရလိမ်မည်။ ဦးဆောင်မှုဆန္ဒ မရှိရင် အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်လည်း မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်လည်
ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။အခြားသူများတွေကိုနိုးဆော်ဖို့သို့ကွဲလွဲသောလူတွေကိုကိုင်တွယ်ဖို့လိုအပ်သောအရည်အချင်းများကို ရှာဖွေရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် သင်သူများကို ဦးဆောင်မှု ၊ကူညီဖို့
မင်းကတကယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်သေချာလား။အကယ်၍မင်းသေချာမယ်ဆိုလျှင် ရှေ့ဆက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခေါင်းဆောင်မှု ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့် သို့ ဖြစ်ထိုက်
မဖြစ်ထိုက် စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ လိုအပ်လိမ်မည်။
အောက်ပါ လက္ခဏာများကို သင်ဘယ်အဆင့်မှာရှိလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပေး ပါလိမ်မည်။
်ို ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် နိုးဆော်ဖို့ နှင့် လမ်းညွန်ဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဌင်းလက္ခဏာများ အားလုံး သင့်ဆီမှာမရှိလည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ယ္ခုသူတို့ကို အသုံးပြုပြီးတော့
ခေါင်းဆောင်မှုကို တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးပါ။•အခြားလူက ကျနော်၏ ထင်မြင်ချက်းများ ရှာတဲ့အခါမှာ ကျနော်ပျော်တယ် ။•စီမံကိန်းအလုပ်အပေါ်မှာအဖွဲ့သားများတွေကကျနော့်ကိုယှဉ်ပြိုင်ပြီးမေးခွန်းထုတ်လည်းကျနော်စိတ်မဆိုးဘူး။
•ကျနော်အဖွဲ့ သားများထဲမှာ ကောင်းတဲ့လူကော ၊ ဆိုးတဲ့လူပါပါ ကူညီတယ်။•ကျနော့်ကိုယ်ရေးကိုယ်သာ စိတ်ဝင်စားတာထက် အများအရေးကိစ္စကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။•ကျနော်အဖွဲ့နဲ့အတူလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အဖွ့သ
ဲားစိတ်စာတ်အပြည့်ထားပြီးတော့ ကူညီပံ့ပိုးပေးတယ်။•ကျနော်ထင်မြင်ချက်များကို အခြားလူတွေကယူပြီး လက်တွေ့လုပ်ရင် ကျနော်နှစ်သက်တယ်။•အခြားလူ စွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့အတွက် နည်းပြ၏ကဏ္ဍမှာ ကစားတာ ကျနော်ကြိုက်တယ်။•ကျနော်ကိုယ်ပိုင်ပြသာနာများကိုအဖွဲ့အပေါ်ကျရောက်တာထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေရှင်းတာကြိုက်တယ်။
•အခြားလူအောင်မြင်မှုအထိန်းအမှတ် ကျင်းပဖို့အတွက် ကျနော်အခွင့်အရေး အမြဲထမ်းလိုက်ရှာတယ်။•ကျနော်န့သ
ဲ ဘောမတူတဲ့လူတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်တယ်။•အဖွဲ့ပြသာနာရှိတဲ့အချိန်မှာ ဌင်းဟာ ကျနော်ရဲ့ပြသာနာဘဲလို့ခံယူတယ်။•ဖြစ်ပေါ်လာသော ထင်မြင်ယူဆချက်များကို အဖွဲ့ထမ
ှဲာဝေမျှတာ ကြိုက်တယ်။Commitment to the Mission and Vision of the Organization
(အဖွဲ့အစည်း၏ မျော်မုန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင် သုိ့ တည်းခြားသောနည်းလမ်းများ)
ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆို မထမဦးဆုံး တီတွင်ဖန်တီးသူဟာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများ ဖြစ်လျှင် တစ်ညလုံး သု့မ
ိ ဟုတ် တပတ်လုံးလုံး ကိုယ့်အလုပ်လို
သဘောထားပြီး အနှစ်နာခံရလိမ်မည်။ဌင်းခေါင်းဆောင်များဟာကုမ္မဏီမှာအမွေဆက်ခံဖို့စီးပွားရေး၊နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေးအမြင် မျှဝေရမည်။ ခေါင်းဆောင်းက အမွေဆက်ခံမယ် လူတွေကို နည်းပြလုပ်ပေးရမယ်။ ဒါမှ
ပန်းတိုင်မျော်မုန်းချက်များ သိအောင် ပြောပြပေးရမယ်။
လုပ်တဲ့နေရာမတူသလိုလုပ်ဆောင်ချက်လဲမတူကြပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကုမ္မဏ၏ ပန်းတိုင်နှင့်မျော်မုန်းချက်ပြည့်စုံ ဖို့ဘဲ
ဖြစ်ပါတယ်။What's the Difference betweenamission statement andavision statement?
(ပန်းတိုင် နဲ့ မျော်မုန်းချက် ကြား ဘာတွေကွာခြားမှုရှိတာလဲ။)
ပန်းတိုင်ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအစိကရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္မဏီ၏ပန်းတိုင်ဟာ ကုမ္မဏီခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ နှင့် ရောင်းချရန် သိုလှောင်ထားသော
လုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့ရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဌင်း၏တော့ချက်များကတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုရှိမရှိ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ တိုင်းတာရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ိ တူလိပ်တပ်နိုင်ပါတယ်။ ပန်းတိုင်မှာတော့ ကုမ္မဏီဘာလုပ်ရမလဲ
၊အလုပ်ကဘယ်လိုလုပ်လျှင်ပြီးနိုင်မလဲဆိုတာမျော်မုန်းချက်ကကူညီပေးပါတယ်။မျော်မုန်းချက်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရင်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မလဲဆိုတာသတင်းစောင့်ကြည့်တဲ့သူက ပရိတ်သတ် သု့မ
ိ ဟုတ် အလုပ်သမားများအား အသိပေး ၊ သတင်းပေး
ိုပ်ငန်းများအတွက်သတင်းပေးရမယ်။ထိုအဖွဲ့အစည်းတွေကဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှာရင်းနီးမြုပ်နှံနိုင်မလားမနိုင်ဘူးလားပေါ့ဖောက်သည်ကို သတင်းပေးရမည်။
သတိယ ပင်ကိုယ်စရိုက် ဖြစ်သော ရိုးသားမှုဟာ အောင်မြင်မှုလိုသော ခေါင်းဆောင်တိုင်း
ရှိရမည်။ ရိုးသားမှုအနက်စိပ္ပါယ်က မင်း၏စကားဟာ မုန်ကန်ရမယ်။ အပြောနဲ့ အလုပ် ကိုက်ရမယ်။
ို တွက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သလား မဖြစ်ဘူးလားဆိုတာ စဉ်းစားရမည်။ ကတိ ကနေလာတဲ့ဟာ မဟုတ်ဘဲ
သူ/မအလုပ်လုပ်တာသင့်ကိုအရိုအသေ၊အတင်းအဖျင်းပြောတာမရှိတဲ့လူကုစားဖို့၊သင့်အတွက်အလုပ်ရုဏ်ပြုမှတ်တမ်းမဟုတ်ဘဲမင်းသေချာနှင့်မှတ်တမ်းယူရမည်။ဌင်းအချက်အလက်များဟာ ရိုးသားမှု ရှိမရှိ လိုက်ရှာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာမရိုးသားသောတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအလုပ်နေရာပတ်ဝန်းကျင် ဘယ်လိုနေလဲ။ အလုပ်မှာ သင်ပျော်ရွင်စွာ သွားနိုင်ခဲ့ရဲ့လား။ မင်း၏စီမံကိန်း
ဲူ့သလား။ဌင်းအမေးခွန်းများအတွက် မင်းရဲ့အဖြေက NO လို့ ဖြေကြမှာပါ။ အကယ်၍ အလုပ်နေရာမှာ ရိုးသားမှု
ထို့ကြောင့်ရိုးသားခြင်းကိုကျင့်ကြံရမယ်။ဌင်းကျင့်ဖို့အတွက်အစိကတော့ချက်အောက်ပါ ဖေါ်ပြသော သုံးချက်ကို သင်နဲ့ သင့်လျော်ရာ အချက်ကို ကျင့်ကြံနိုင်ပါတယ်။သုံးခုရှိတယ်။1. Sincerity ဟန်ဆောင်မှုကင်းခြင်း
•အမှားတစ်ခု နှင့် ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ အပြစ်မတင် တတ်ခြင်း။•လက်ခံရသော တာဝန် ၊ ကတိပေးသောအလုပ်များကို ပြီးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း။•ကန့်သတ်ခြင်းများဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် ရိုးသားမှုရှိခြင်း။•အမှားများကို တာဝန်ယူလက်ခံတတ်ခြင်း။•အမှန်တရားကို ပြောတတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
2. Consistency (မပြောင်းလဲနိုင်သော နည်းလမ်းများ)
ဒီရိုးသားခြင်း ရှုထောင့်ဟာ ခေါင်းဆောင်များကို ထင်ရှားစေပါတယ်။•ဖြစ်နိုင်သလောက် အလုပ်သမားများကို တန်းတူညီတူ ကြည့်ရှုခြင်း။•ပေးထားသော ကတိများအတိုင်း လုပ်ဆောင်တတ်ခြင်း။•သူ့၏ အလုပ်သမားများထက် အလုပ်ပိုကြိုးစားမှု ရှိခြင်း။•သူကိုယတ
်ိုင်အတွက်ကော သူ့အလုပ်သမားအတွက်ပါပါ တူညီသောမျော်လင့်ချက်များ နှင့် အုပ်ချုပ်တတ်ခြင်း။3. Substance (အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့လူအားလုံး ရိုးသားခြင်းကိုရည်ညွန်းတယ်)
•ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲမှာဘဲသိမ်းထားမယ်။•ကိုယ့်အဖွဲ့ ၀င်များကို အတင်းအဖျင်းမပြောဘူး ၊ တိုင်းတန်းခြင်းမရှိဘူး။•ကိုယ့်အတွက်ဘဲကောင်းအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ အဖွဲ့အတွက်လည်း ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။•သင်၏ အလုပ်သမားများတိုးတက်ဖို့ ဂဂုစိုက်မှုရှိပါ။•ပြသာနာများကို ဦးစားပေးပြီး ဘယ်လိုသဘောထားကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပါစေ ပြတ်သားစွာဖြေရှင်းကိုင်တွယ် တတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။Understanding Your Role: Leading Vs. Managing (ဦးဆောင်ခြင်း နှင့် စီမံခြင်း သင်၏
ှိုစ်ခုဟာလူတွေကိုကျနော်တို့ကိုအလုပ်ထံလူတစ်ယောက်ဟာအဘယ်ကြောင့်လဲခေါင်းဆောင်မှုသုိ့စိတ်ရုပ်သလိုကျဆုံးသွားပါလိမ်မည်။သူမဦးဆောင်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲနေရာမှာဘတ်ဂျက်နှစ်ခုစလုံးဟာခဏဏဦးဆောင်မည်ဆိုလျှင်လူတွေအရည်အချင်းခေါင်းဆောင်တဲ့နှင့်ထားမယ်ဆိုလဲအလုပ်ကိုအစီအစဉ်တကျမခန့်ခွဲတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကဏ္ဍတော်တော်များများဟာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် ခေါင်းဆောင်မှု နှစ်ခုစလုံး
လိုအပ်သောအရည်အချင်းများဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနေရာမှာ လည်း တစ်ခုတည်းကိုအာရုံစိုက်နိုင်သလို
အခြေအနေအပေါ်မှာ မှုတည်ပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် လိုက်ဖက်အောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဌင်းလက်တွေ့ သင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ သူတို့ ခြားနားမှုရှိတယ် ဆိုတာကို သိဖို့တော့လိုပါတယ်။
ဲီးဆောင်သူအကြား ဘာခြားနားမှုရှိလဲ။
ိုင်မလဲ၊ဘယ်အလုပ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိဘူး ပြောမလား။
စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ဦးဆောင်မှု အကြား ခြားနားသော အချက်များ
စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဦးဆောင်မှုဆန်ကျင်ဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ကြားတဲ့အချိန်မှာသင်ဘယ်လိုထင်လဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် သူတို့အယူအဆဟာ နည်းနည်းတော့ သံသယရှိလိမ်မည်။
ဲ စ်ခုတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ခွဲဖို့ခက်ခဲပါတယ်။Managementသို့သော်လည်း&ဘယ်လိုခြားနားသလဲဆိုတာ နားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်။နှစ်ခုစလုံးလည်း သိဖို့လိုပါတယ်။Leadershipဒီမှာ Management နဲ့ Leadership အကြားခြားနားချက် ဥပမာ………
•စီမံခန့်ခွဲခြင်း = အလုပ်၊ ထုတ်ကုန် ၊ ၀န်ထမ်း တာဝန်များစေလွတ်ခြင်း၊စီမံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။•ခေါင်းဆောင်မှု = လမ်းကြောင်းစေ့စပ်မယ်၊ နိုးဆော်မယ် ၊ လူတွေကိုဆွဲဆောင်မယ် ၊ မျော်မုန်းချက် ၊
ရည်ရွယ်ချက် (သု့)ိ ပန်းတိုင်ဆီသို့ လူတွေကိုဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ှု အလုပ်ကိုစီမံတယ်။ (We manage tasks.)•ဦးဆောင်မှု=လူတွေကို ဦးဆောင်တယ်။ (We Lead People.)အဲဒါတွေမရှင်းသေးဘူးဆိုလျင် အခြေပြဇယားကိုကြည့်ပါ။
ဦးဆောင်သောလူတစ်ယောက် (A Leader)စီမံခန့်ခွဲသောလူ တစ်ယောက်(A Manager)
•ရေတိုဘဲ စဉ်စားမယ်။ (Thinks short term)•နည်းဗျူဟာများကို စဉ်းစားမယ်။ (Thinks Tactics)•ဘယ်လိုလဲ ၊ ဘယ်အချိန် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲလိမ်မယ်။ (Plans How and•ရေရှည်ကိုစဉ်းစားမယ်။ ( Thinks Long Term)•မဟာဗျူဟာများကို စဉ်းစားမယ်။ (Thinks Strategy)•ဘာလဲ ၊အဘယ်ကြောင့်လဲ တောင်းဆိုလိမ်မယ်။ ( Asks what
•အောက်ခြေကနေ ကြည့်လိမ်မယ်။ (Looks at the bottom line)•တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးမှုကို သိတယ်။ (Knows the day-to-day•မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကိုကြည့်လိမ်မယ်။ (Looks to the horizon)•ဖောက်သည်ကိုသိတယ်။ (Knows the customer)•အောင်မြင်ပြီးသောထုတ်ကုန်များ နှင့် ထုတ်ကုန်သစ်အပေါ်business)
••ယ္ခုထုတ်ကုန်တိုးတက်မှု နှင့် ဆက်လက်ထုတ်လုပ်မှုကို ဗဟုတ်ပြုတယ်။အရည်းအချင်းမှ အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်တယ်။ (Builds successဗဟိုပြုတယ်။
•success through employees)through quality)
•တာဝန်ယူမှုများ (Supervises)•သူ/မ၏ နေရာကနေကနေ အဏာရလာတယ်။ (Gains authority from
his/her position)အလုပ်သမားများမှ အောင်မြင်မှုကို တည်ဆောက်တယ်။ (Builds•
စိတ်နေသဘောထား နှင့် အပြုအမှုများကြောင့်
အဏာရလာတယ်။ (Gains authority by his/her mindset
and behavior)အခြေပြဇယားဖတ်ပြီးရင် Management နှင့် Leadership အကြောင်းခြားနားပုံကို
Our perceptions of Leadership ကျနော်တို့၏ ခေါင်းဆောင်မှု သိရှိနားလည်ခြင်း
မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ မင်းစီမံခန့်ခွဲတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်များကိုကော ဘယ်လိုလဲ။ ခြားနားအောင် မင်းဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။
အချို့သောကိစ္စများမှာ အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ လူရဲ့
အလုပ်ခေါင်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲသူ ၊ ဆက်ဆံရေး သု့မ
ိ ဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး
အုပ်ချုပ်သူ နှင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ညွန်ကြားသူ။ ထိုခေါင်းစဉ်များ ကဲ့သို့ ရိုးရှင်းသော
အခွင့်အဏာတစ်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အဖွဲ့အစည်း၏ တစ်ကယ်ခေါင်းမှု အကြောင်း
The most effective leaders are those who can successfully influence the way other
people influence themselves.
ကျနော်တို့ကြိုးစားကြတယ်။အကယ်၍အခွင့်ကြုံမယ်ဆိုလျင် ဦးဆောင်လိုက်ပါ။ကတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့သင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိမယ်ဆိုလျင်ဆက်သွယ်ရန်နောက်တစ်ခါမင်းသေးငယ်သောထုတ်လုပ် ကုမ္မဏီတစ်ခုအတွက် အောက်ပါ ဥပမာပုံလေးကို အသုံးပြုရန် ရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုင်ရာရေးဆွဲတဲ့ပုံထဲမှာယောက်တိုင်း၏ခေါင်းစဉ်မဖတ်ခင်မှာပုံစံတစ်ခုလုံးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဖွဲ့အစည်း၏ ခေါင်းဆောင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံအကြောင်း ဘာကို ဆိုလိုသလဲ။
ပြန့်သောနေရာယူပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေတယ်။ဒီအညွန်းဟာဆက်သွယ်ခြင်းဟာကျနော်တို့ဆီအဖွဲ့အစည်းအခွင့်အဏာများက သီးခြားသော ယူနစ်မြောက်များစွာကို ပြန့်ပွား ခွဲဝေစေပါတယ်။ ယူနစ် သို့
အဖွဲ့ခွဲများ တစ်ခုချင်းစီ ကိုယ်ပိုင်အလုပ် သမားများရှိကြတယ်။ သို့သော် ပုံ (၂) အရပ် သူတို့အားလုံးဟာ
တစ်ခုတည်းသော ဗဟိုဌာန သို့ နောက်ဆုံးအခွင့်အဏာ ပြန်သွားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
နေရာများကိုသင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။မင်းဘယ်သူ့ကိုထောင်လိုက်ပိုများရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုင်သော ရေးဆွဲတဲ့ ပုံ(၂)အပေါ်မှာရွေးချယ်မလဲ။လုံလောက်သောအချက်အလက်များမင်းပြောနိုင်မလား။ အခွင့်အရေးများကတော့ အရာနှစ်ခုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး မင်းရွေးချယ် ရလိမ်မယ်။ အလုပ်
ခေါင်းစဉ် နှင့် တာဝန်ပေးတဲ့လူလား သို့ အခြားပုဂ္ဂိုလ် တွေရွေးမလား။အဖွဲ့အစည်းရေးဆွဲတဲ့ပုံထဲမှာခေါင်းဆောင်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာပါ။စီမံခန့်ခွဲသူများကဲ့သို့ရွေးချယ်ဖို့ မင်းရပါမီ ရှိမှာပါ။ ကျနော်တို့ ထင်ကျတဲ့ အတိုင်းပဲ ဌင်းဟာ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြပါတယ်။
ဌင်းဟာမှန်ပေမဲ့ အဖွဲ့အစည်းရေးဆွဲတဲ့အထဲမှာ ဘယ်သူခေါင်းဆောင်လဲဆိုတာ မင်းမပြောနိုင်ဘူး။Asaleader yourself, it’s important to remember that leaders don’t always holdajob title or
wearasuit and tie. Our culture tends to look to those who bear the distinctive titles or make
the high salaries or make sweeping, successful changes as the leaders in our organizations. But
this view is too narrow and limits your team’s potential.How your personality style affects your ability
(သင်၏ပင်ကိုစရိုက်စတိုင်လ်ကို ဦးဆောင်မှုစွမ်းရည်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်ရှိသလဲ။)မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။။ကျနော်တို့ဟာ ကမ္ဘာကို တစ်နည်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းတြုံ့ ပန်မှုရှိပါတယ်။ကျနော်တို့၏ အကျင့်များ ၊ အပြုအမှုများ နှင့် စရိုက်များ တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် ကွဲပြားကြတယ်။
တစ်ခါတစ်လေကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျနော်တို့ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အကြိုက်တူ ၊ စိတ်တူ ၊
အမြင်တူနေတာ တွေ့ရပြန်တယ်။ ဌင်း အကြောင်းကြောင့်မို့ တည်မြဲသောခင်မင်မှု မထားနိုင်သော်လည်း
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆက်အသွယ် လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးတယ်။
ကျနော်တို့နြဲ့ ခားနားတဲ့လူနဲ့ အတူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ဘာဖြစ်လဲ။ သူတို့ကတိတ်ဆိတ်ပြီး ၊
ဲ့ န်းကျင်မှာ နည်းလမ်း သို့ အပြောအဆို ပြောင်းလည်းမှုရှိခဖ
ဲူ့းသလား။ အခြားလူတွေနဲ့ အတူတူ
လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ထိုလူ မင်းဦးဆောင်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုနေလဲ။ ဘယ်လို
နည်းလမ်းနဲ့ ထိုလူတွေကို ကိုင်သွယ်မလဲ။ကျနော်တို့ဟာအာများအားဖြင့်တစ်ချို့သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာခြားနားသောလူတွေကိုိုို အသိကျိုးကျွန်ပြုဖို့လိုတယ်။
ကိုင်သွယ်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့က ယဉ်ကျေးဖို့လိုတယ်။ ကျနော်တို့က သူတ့က
ို မြင်တွေကိုခေါင်းထဲထုတ်ထားရလိမ်မည်။ဆိုးတဲ့အခြေအနေကြုံလာရင်ကျနော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြဖို့ စက်ဆုတ်ကြလိမ်မယ်။ သူတို့နဲ့အတူနေတဲ့အခိုက်မှာ အခြေခံသဘောတရားလောက်ဘဲငြင်းခုံ ပြီးသူတ့န
ိုဲ့ဝေးတော့ သူတို့ဆိုးတဲ့အကြောင်းပြောလိမ်မည်။ ဌင်း ဆိုးသောလူတစ်ယောက်နဲ့ မင်းအကြားရှိတာ
ဒီလောက်နဲ့ပြီးလျင် လုံလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်လျှင် သင်ဒီလိုတုံပြန်မှုဖြင့် သင်ဦးဆောင်ရာမှာလည်း
ဲားလုံးအတွက်လည်း အန္တရယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခြားလူအတွက်ဖြစ်လာတာသတိမိတဲ့အချိန်မှာ တကယ်လက်တွေ့မှာ သူတို့ဟာ ကျနော်တို့ လူဖြစ်လာတယ်။ကျနော်တို့ အခြားလူစရိုက်နဲ့ အရမ်းခြား နေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့အဖုိ့ အခက်အခဲ၊အနောက်အယှက်
၊ထူးဆန်းမှုသို့အခြားလူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလိမ်မယ်။ဌင်းအချက်များကကျနော်တို့အချိန်မှီကုသမည်ဆိုလျင် အခြားလူလည်းသဘောတူ လာလိမ်မည်။ ထုထ
ိ င်မြင်ချက်များဟာ လူတွေကိုဦးဆောင်ရာမှာ
ိုပ်တဲ့နည်းလှမ်းအတိုင်းအဘယ်ကြောင့်အဆင်ပြေသလဲဆိုတာ သင်ထိုးသွင်းသိမြင်နိုင်ပါတယ်။သု့ေ
ိ သာ် ထိုစနစ် အခြေအနေ ဆက်လက်ရုန်းကန်ဖို့ အခြားရွေးချယ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
ိုိုက်လုပ်သလဲဆိုတာ သင်နားလည်အောင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့် မင်းအဆင်ပြေသလို
ိုဲ့ဖဲဝေမယ်ဆိုလဲရတယ်။ဌင်းဟာလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အဏာပေး၊ ထုတ်ပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကို အသိကျိုးကျွန်ပြုတယ်
သို့ သူတို့ကိုကုသရတယ်။ အကယ်၍ မင်းဒီလက်နက်အသုံးချမယ်ဆိုလျင်, ဌင်းနည်းလမ်းဟာ လူတိုင်းမင်းကို
အကယ်၍ထိုတွက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရမယ်။သူတို့၏ဘာသာစကားသင်ပြောနိုင်မည်ဆိုလျင်မင်းဒီလက်နက်အသုံးချတဲ့အချိန်မှာပိုကောင်းတယ်၊မင်းပိုကြားနိုင်တယ်။ပြီးတော့ပိုနားလည်နိုင်ပါတယ်။The Personality Matrix (ကိုယ်ပိုင်စရိုက် သို့ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေး ဖြစ်ပျက်သောဝန်းကျင်အခြေအနေ)သိပ္ပံပညာရှင်က ရာစုနှစ်များစွာ လူတွေရဲ့ပြုမှုများ အတန်းစားခွဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ လူရဲ့ အပြုအမှု စရှိက်တွေ
ိ သ်ာကျနော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်တော့ ဒေါက်တာ အီလီး(န်)ရပ်ဆို (Dr.
Eileen Russo) ပုံစံကိုသုံးမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမအသုံးပြုတဲ့ပုံစံဟာ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးကို ရှုထောင့်
(၂)မျိုးဖြင့်ဖော်ပြပါတယ်။ဌင်း(၂)မျိုးဟာစဉ်းစားနိုင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်ပါတယ်။ထို(၂)မျိုးတုံပြန်ချက်များမှာ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း သို့ ပင်ကိုယ်စရိုက် လေးမျိုးကို စက်ဝိုင်းလေးပုံတစ်ပုံ၌
ဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ပင်ကိုယ်စရိုက် သုိ့ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း အခြေခံအားဖြင့် ရလဒ် (၄) မျိုးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
နှိမ့်သော စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု နှင့် နှိမ့်သောယုံကြည်မှုပေါင်းလိုက်လျင် = စနစ်ကျသော
Low Expressiveness + Hight Assertiveness = Direct
နှိမ့်သောစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနှင့်မြင့်သောယုံကြည်စိတ်ချမှုပေါင်းလိုက်လျှင်=ပွင့်လင်းသောHigh Expressiveness + High Assertiveness = Spirited
မြင့်မားသော စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု နှင့် မြင့်မားသော ယုံကြည်မှု ပေါင်းလိုက်လျှင် = စိတ်စာတ်တက်ကြွသောHigh Expressiveness + Low Assertiveness = Considerate
မြင့်မားသော စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု နှင့် နှိမ့်သောယုံကြည်မှု ပေါင်းလိုက်လျင် = စိတ်အားထက်တန်သောအောက်မှာတစ်ခုချင်းစီကို ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါတယ်။Direct ဖွင့်လင်းငြိမ်သာသည်၊ဖြောင့်မတ်သည်။ဖွင့်လင်းဖြောင့်မတ်တဲ့လူဟာ
ထင်မြင်ယူဆချက်ဖြင့်လုပ်တယ်။ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်များ နှင့် သူတ့စ
ိုိတ်ထဲမှာရှိတာကို ပြောဖို့မကြောက်တတ်ဘူး။ သူတ့က
တတ်ကြပါတယ်။ဖွင့်လင်းငြိမ်သာဖြောင့်မတ်စိတ်ရှိတဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်သို့ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းသမားတွေဟာသက်ဦးဆံပိုင်စနစ်၊ ခေါင်းမာခြင်း ၊စိတ်မရှည်ခြင်း နှင့် ၀န်တွေကို အလွန်းအလွန် ထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ကို အလုပ်လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဆိုတာကို သူတို့ မြင်တတ်တယ်။ သူတ့က
စောင့်ထမရှိသလိုအရာတစ်ခုကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှင်းပြဖို့စောင့်ဆိုင်းတာမျိုးမရှိတတ်ပါဘူး။တစ်ခါတစ်လေ လူအများရဲ့ခံစားချက်အပေါ်မှာ မှုတည်ပြီး အဖြေရလဒ်ကို ကြိုတင်ပြောနိုင်တယ်။Direct နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ ဥပမာလေးကြည့်ရအောင်..........
•အချက်အလက်မြန်မြန်ရအောင်ကြိုးစားပါ။ သက်ဆိုင်ရာနောက်ခံတွေအများကြီးသွေဝေမနေပါနဲ့။•အကယ်၍ သင်ကအပြောင်းအလဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့စားချက်ပေါ်လာသော အကောင်းဆုံးရလဒ်ကို စောင့်ပါ။•ပို၍ကောင်းအောင် ၊ ပြည်စုံအောင် ဖြစ်နိုင်သောအချိန် သူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးပါ။•တိုတိုတောင်းတောင်းပြောပါ။ဖြစ်နိုင်သောလက်တွေ့ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုကို စီမံပါ။•စတဲ့အချိန်ကော ဆုံးတဲ့အချိန်ပါပါ တိကျမှုရှိပါ။•မသေချာတာကို ကတိမပေးပါနဲ့။•လူသစ်တွေကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုမမေးပါနဲ့။•သူတို့အတွက်ရှေ့ဆက်ကြိုးစားဖို့ တိကျသောအတိုင်းအတာတစ်ခုပေးပါ။•လိမ်မပြောပါနဲ့ အမုန်တိုင်းပြောပါ။Spirited စိတ်စာတ်တက်ကြွမှု သို့ စိတ်အားထက်သန်မှုတက်ကြွရှိတဲ့ပင်စကိုယ်စရိုက်သို့ပင်ကိုအရည်အတွေးရှိတဲ့လူတွေဟာအဖွဲ့ရဲ့ အိပ်မက်များကိုဦးဆောင်စေတယ်။ ကျနော်တို့ကြားဖူးတဲ့ပုံပြင် Pied Piper တံပိုးမှုတ်သူ သို့ ပုလွေသမား ကဲ့သို့ အကြံအစည်တစ်ခုကို
အလုပ်ထဲမှာသူတို့အန္တရာယ်များကိုမကြောက်တတ်ဘူး။ အခြားလူကိုလည်း အန္တရာယ်ကို မကြောက်ဖို့ မကြာခဏ သိမ်းသွင်းစည်းရုံးလျက်ရှိတယ်။အလုပ် သို့ စီမံကိန်းတစ်ခု စတင်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်စာတ်တက်ကြွလျက်ရှိ်ကြပါတယ်။ ဌင်းစိတ်စာတ်တက်ကြွမှုဟာ
စီမံကိန်းပြီးဆုံးတဲ့အထိ အမြဲတမ်းတက်ကြွလေ့ မရှိကြပါဘူး။ အချိန်ခဏလေးအတွင်း အလုပ်ထဲမှာ အရုံစိုက်လာအောင်၊
အလုပ်အကြောင်းအသေးစိတ်သိအောင် ပုံကြီးချဲ့လေ့ရှိတယ်။ ဌင်းဟာ အလုပ်များအကြီးကြီးလုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့အချိန်မှာ
သူတို့၏အာရုံစိုက်မှုကြာရှည်စွာထိန်းထားဖို့ခက်ခဲတယ်။စိတ်စာတ်တက်ကြွတဲ့လူတွေအတွက်အချိန်စီမံခန့်ခွဲဖို့ပြသာနာဖြစ်လိမ်မယ်။ သူတို့အဲလိုပြသာနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် စီမံကိန်းတစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်အချိန်ပေးရင် ပြီးနိုင်မလဲ၊နောက်ထပ်အလုပ်ကိုကတိပေးဖို့အတိအကျဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်လိမ်မည်။အကယ်၍အခြားလူကအင်အားနဲ့ချီတက်မယ်ဆိုလျှင် သူတို့နားတောင်ဖို့အချိန်က ခက်ခဲလိမ်မည်။စိတ်စာတ်တက်ကြွသူဦးဆောင်ဖို့ အတွက်အောက်မှာ အကြံအဥာဏ်ပေးထားပါတယ်။
•သူတို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖော်ထုတ်ခွင့် ၊ စဉ်းစားတဲ့အချိန်ခွင့်ပြုပါ။•ဆွေးနွေးဖို့အတွက် သူတို့အချိန်ဘယ်လောက်ခွင့်ပြမလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါ။•အခြားလူသူရှေ့မှာ သူတို့ကို ချီးမွမ်းပါ။•သူတို့ အတွေးအခေါ်အကြံအဥာဏ်ကို စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြပါ။ သို့သော် သူတို့လက်တွေ့ပြန်လုပ်ဖို့ စီမံပါ။•သူတို့ချဲ့ကားပြောဆိုတာကိုလည်း နားလည်ပေးပါ။•တိကျသောခြေလှမ်းများ နှင့် ပြတ်သားသော မင်းရဲ့မျော်လင့်ချက်များကို အချိန်ဇယားဖြင့်တည်ဆောက်ပါ။•သူတို့ကိုကူညီပါ။ နောက်ဆုံးအလုပ်ပြီးဖို့အတွက် အရေးကြီးသောအချက်အလက်ကိုတည်ခင်းပါ။•တိကျသောရလဒ်များ နှင့် ခြေလှမ်းများအထက်သို့ ရောက်နိုင်အောင် သူတို့အကြံအဥာဏ်တွေကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါ။•အကယ်၍ သူတိုအောင်မြင် သို့ ကျဆုံးလျင် ဘာကြောင့်အောင်မြင် ၊ဘာကြောင့် ကျဆုံးသလဲဆိုတာကို
မြင်သာအောင်နည်းလမ်းပြပေးပါ။စိတ်စာတ်တက်ကြွတဲ့လူဟာ သူတို့ဗီဇာအားဖြင့် မဖေါ်ပြဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံဖို့ခက်ခဲလိမ်မည်။
် ချမ်းသာသော သူတို့စိတ်ခံစားမှုန့အ
ဲ တူ အခြားလူတွေကို ဧည်ခံတယ်။အခြားပင်ကိုယ်စရိုက်ကတော့ဒီလိုအခြားလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။အဖွဲ့အတွက်နေ့လည်စာ သို့ အခြားစည်းရုံးခြင်း စီစဉ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ အကယ်၍ အကြံအဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုပေါ်လာလျှင်
ိုိုကောင်းမကောင်းအသိအမှတ်ပြုခိုင်းလိုက်တယ်။အကယ်၍ကောင်းမယ်ဆိုလျင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း အသိပေးခိုင်းတတ်တယ်။ အလုပလ
်ိုအပ်သောအချိန်များကို ပုံစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတယ်။
အဖွဲ့များရဲ့အရှေ့မှာ ရှက်ကိုးရုက်ကားမဖြစ်အောင် စနစ်တစ်ခု ဖော်ထုတ်ရမယ်။Systymatic စနစ်ကျသောစနစ်တကျ ပင်ကိုရိုက်ရှိဟာ ကျနော်တို့အကြားမှာ စိစစ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ခြေက
အချက်အလက်များနှင့် ပို၍ ဆာလောင်အောင် အောက်ခြေကနေ ထိုးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ တာဝန်အသေးစိတ်ကို
ို ကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်လိမ်မည်။ ယုတ္တိဟာ သူတ့ရ
ိုဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်တယ်။
ိုဲ့ခံစားချက်အပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာထက် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု နှင့် စိစစ်မှုအပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။
ို လုပ်ပုံကိုင်ပုံဟာချင့်ချိန်မှုနှင့်စိတ်ရှည်မှုရှိတယ်။သူတို့အဆင့်အတန်းပေါ်မှာအလုပ်ကိုရှေ့ဆက်ရူပြီးတော့ သင့်လျော်သလို့လုပ်ဆောင်တယ်။ သူတို့က တိကျသောဦးတည်ရှိရာများ နှင့်
ရှေ့ဆက်ကြိုတင်ခန့်မုန်းနိုင်မှုကိုကြိုက်တယ်။အခြားလူကိုတစ်ပုံစံတည်းလုပ်ဖို့ စာအုပ်ကိုထိုးလိမ်မယ်။စည်းကမ်းအားဖြင့် တရားမျှသခြင်းကိုလုပ်ဆောင်လိမ်မည်။
ဲ တ်သက်ရင် အသေးစိတ်လိုချင်တယ်။ အလုပ်ကို ဧရိယာတစ်ခုတည်းသီးသန့်မြင်ချင်တာထက်
တစ်ခုလုံးမြင်အောင်ပုံဖော်လေ့ရှိတယ်။ပုံမုန်လည်ပတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကမှောက်ကမာဖြစ်မကိုကြောက်လေ့ရှိတယ်။ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း သုိ့ စနစ်တွေပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာ စည်းရုံးဖွ့စ
ိုို ကြည့်ရတာစိတ်မ၀င်စားပုံ သို့ အေးတိအေးစက် ထင်ရတယ်။ ထု့လ
ယုံကြည့်ရသောလူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောထားကွဲလွဲမှု ဖြစ်လာလျင် သူတ့ေ
ို င်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ထက် ရှောင်သိမ်းဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်။စိတ်မချမ်းသာခြင်း သို့ စိတ်ပျက်ခြင်း ဖြစ်လာရင် ဆက်သွယ်ဖို့နည်းလမ်း ၊ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းခြင်း
ရပ်ပစ်လိမ်မယ်။ဒီစနစ်ကို ဦးဆောင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။•သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ တိကျမှုရှိအောင် ကြိုးစားပါ။•စီမံကိန်းအဆင့်လိုက် သူတို့ သုသေသန နှင့် စိစစ် ဖို့ အတွက် အချိန်ပေးလိုက်ပါ။•စိစစ်ပြီးသင့်တဲ့အချိန်နှင့်တစ်ဆင့်စတင်ဖို့ အချိန်ကိုတည်ခင်း ပေးပါ။•သူတို့ ဘာသင်ယူလဲဆိုတာ ပြန်စစ်ဖို့ အချိန်ပေးပါ။•သူတို့နင့်တွေ့တဲ့အခါမှာ သူတို့စည်းလုံးမှုရှိအောင် ပြင်ဆင်ပါ။•မင်းရဲ့တုံပြန်ချက်မှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်သာ ခေါင်းစည်းကိုရှောင်ပါ။•ကွဲပြားမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအခြေအနေပေါ်၊ခံစားချက်များနှင့်ကိုရေးကိုတာကိစ္စများဂဂုစိုက်မှုရှိသောပင်ကိုစရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဦးဆောင်မှုဟာပြီးအောင်ဖြေရှင်းပါ။Considerate ဂဂုစိုက်မှုရှိသောသူ သို့ သဘောကောင်းသောသူ။
သူတို့က ပြောဆိုခွင့်၊ ခံစားခွင့် နှင့် အထောက်ပံ လူတိုင်းတစ်လက်စီ ရစေချင်သော ဆန္ဒရှိတယ်။ သူတို့ပင်ကိုစရိုက်က
အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသူ ၊ ညွန်ကြားပေးသူ နှင့် အခြားလူ ကူညီခြင်းအားဖြင့် ပျော်ရွင်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ အခြားလူက ဦးနောက်အလုပ်ဖို့ ၊ စိတ်ဖြင့်ပြောဆိုဖို့ မရှိရင် အဲဒါလုပ်ဖို့ တိုက်သွန်းပေးတယ်။ ဒီပင်ကိုစရိုက်ဟာ
ဦးဆောင်ဖို့အတွက်အကြံများ................•သူတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ် အတွေးအခေါ်၊ခံစားချက်များ နှင့် သူတ့က
ိုိုပိုင်ဘ၀လေးကို စိတ်ဝင်စားမှုပြပါ။•သူတို့န့ေ
ဲ ပါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့ ယုံကြည့်မှုမွေးမြူပါ။•သူတ့အ
•သူတို့ရှေ့ဆက်ပြောင်းလဲတိုးဖို့အတွက် ငြိမ်သာစွာပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။•သူတို့အလုပ်ပြီးမပြီး သူတို့ကိုစစ်ဆေးစောင့်ကြည့်ရမယ်။•မေးခွန်းတွေမေးဖို့ နှင့် သူတို့ထင်မြင်ချက် များကှိုမျှဝေဖို့ အားပေးပါ။•သူတ့ရ
ိုဲ့အကူအညီ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်း သူတို့သိခွင့်ပြုပါ။•အလုပ်အသစ်ကိုလေ့လာဖို့ နှင့် လုပ်ငန်းထဲမှာအခြားလူကိုကူညီနိုင်အောင် သူတ့က
ို န်းတိုင်များ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက် ကူညီပါ။ သို့သော် သူတ့က
ိုဲ့ ကတိသိစွာကို ရှာတွေ့လိမ်မယ်။The Platinum Rule ရွေဖြူဥပဒေ (သို့) ရွေဥပဒေလိုချင်ကြတယ်။ဂဂုစိုက်စောင့်ကြည့်ပါ။
ို ကြောင်းအသေးစိတ်သိမယ်။ပြီးတော့ပင်ကိုစရိုက် အသိပညာဆိုင်ရာအားလုံးဟာ အခု သင်သိသွားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သိတဲ့စနစ်ကို
ိ ဟုတ်ဘယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်ပါစေ နောက်ဆုံးသဲလွန်စက သင့်ကိုကူညီနိုင်မှာပါ။ ဌင်းသဲလွန်စမှာ ရွှေဖြူ ဥပဒေသို့မဟုတ် ရွှေ ဥပဒေလို့ခေါ်ပါတယ်။•We've all heard the golden rule:•ကျနော်တို့အားလုံး ရွေဥပဒေ ဆုတ
ိာကြားဖူးကြမှာပါ။•Treat others the way that you would like to be treated.•သင်လိုချင်သောနည်းလမ်း သူများကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံ သို့မဟုတ် သူများကိုဦးဆောင်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။•But successful leaders understand and employ the platiunm rule:•အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်များဟာ ရွေဥပဒေကို နားလည်ပေမယ့် ရွှေဖြူ ဥပဒေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။•Treat others the way that they would have you treat them.•အခြားလူဖြစ်ချင်သောနည်းလမ်းအတိုင်း အခြားလူကိုဦးဆောင်တယ်။သင်လိုချင်သောနည်းလမ်းအတိုင်း သူများကိုပုံသွင်း ဆိုသောရွေဥပဒေဟာ သင်မုချ ကြားခဲ့ဖူးမှာပါ။
ရွှေဥပဒေရဲ့ပြဿနာကလူတိုင်းအလုပ်ကိုတစ်ပုံစံတည်းလုပ်ချင်သောစနစ်ဖြစ်သည်။အကယ်၍ဖြစ်နိုင်ခဲ့သော် ဌင်းနည်းလမ်းအတိုင်း ဦးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ လူတိုင်းအဖို့ ဌင်းနည်းလမ်းအတိုင်း
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သင်နားလည်လိမ်မယ်။ဘယ်မဟာဗျူဟာကအကောင်းဆုံးလဲ။သူတြို့ ဖစ်ချင်သောနည်းအတိုင်းသင်အခြားလူတွေကိုဦးဆောင် သုိ့ ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရမယ် ဆိုတာ ရွှေဖြူဥပဒေလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ိုားလုံးဟာတစ်ကယ်အသုံးပြုရမယ့် သဲလွန်စ ၊ လျှို့ဝှက်ချက်များ ရှိပါတယ်။ ပင်ကိုစရိုက်အားလုံးဟာ သူတ့သ
ိုဲ့စနစ်ဟာမင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ပြောနိုင်၊သူတို့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးအရည်အချင်းနှင့်သူတြို့ ကုံတွေ့နိုင်သော စိန်ခေါ်မှုများကို ကူညီနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံး အလုပ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ သင်တုံပြန်မယ်ဆိုလျင် သင်မှန်ပါတယ်။ အသင်း သို့ အဖွဲ့
ိုအပ်ပါတယ်။ မင်းဆီကနေ သူတို့ဘာအကူညီဖို့ လိုသလဲဆိုတာ
ိ သာ် သင်ခန်စာ အခန်း(၂)မှာ လက္ခဏာများဆွေးနွေး ခဲ့ပြီးသွားခဲ့ပြီ။ သူတ့တ
ိုံ ပြန်မှုတစ်ခုခု
သင်မြင်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့၏အလုပ်အရည်အသွေးခွဲစိတ် လု့ရ
ိ ပါတယ်။ သင်ပို၍ ခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီး လုပ်
မည်ဆိုလျင် ပျော်ရွင်မှု သင်ခံစားရလိမ်မည်။ ထိုနောက် အဖွဲ့သားတွေထဲမှာ ပိုပြီးကျင့်သား ရလိမ်မယ်။
ထိုနောက်သင်ဟာ ပိုကျွမ်းကျင်လာလေလေ အောင်မြင်သောခေါင်းတစ်ယောက်ဖြစ် လာမှာပါ။ခေါင်းဆောင်မှု စနစ်များ Leadership styles
အဖွဲ့အပေါ်မှာ။မင်းပင်ကိုယ်စရိုက်အားဖြင့် ဘယ်လိုအရည်အချင်းနဲ့ ဦးဆောင်ရင်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာသင်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်အောင် ဦးဆောင်မှုအတွက် အချိန်တစ်ခုပေးဖို့လအ
ို ပ် ပါလိမ်မယ်။ မင်းပင်ကိုယ်စနစ်ဖြင့်
အဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်အောင်ဦးဆောင်ဖို့ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါတယ်။သို့သော်အဖွဲ့ တစ်ခုလုံးရှေ့ဆက်ပုံမှန်ဦးဆောင်မှုအတိုင်းမဟုတ်ဘဲပြောင်းလဲဖို့လိုလျင်ပြောင်းလဲဦးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဦးဆောင်မှုအတန်းအစားဟာ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာ ရှိကြပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းမှု သု့မ
ဘောင်အချို့ ခြားနားမှု အခြေအနေများမှာ ကျနော်တို့ ဖြည့်စွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခြားလက်နက်များ ကတော့
လက်နက်ထည့်တဲ့သေတ္တာထဲမှာရှိပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့လက်နက်သေတ္တာဟာလိုအပ်သောအဖွဲ့ အစည်း သုိ့ အလုပ် အခြေအနေပေါ်မှာ ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။The autocratic leadership style သက်ဦးဆံပိုင်စနစ် ခေါင်းဆောင်မှု
သက်ဦးဦးဆံပိုင်ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ဟာသက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ခေါင်းဆောင်များဟာသူ/မရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအများရွေးချယ်တယ်။သူတို့ခွဲထားတဲ့တာဝန်အပေါ်မှာထိန်းချုပ်တယ်။ဌင်းဆိုလိုချင်တဲ့အစိပ္ပါယ်က လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် အခြားလူကို အဏာမပေးထားဘူး။ သူတိုမျော်လင့်များ
နှင့်တည်ဆောက်ပုံကပြောင်းလဲဖို့တော်တော်ခက်တာကိုရှင်းရှင်းလင်လင်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ထိုခေါင်းဆောင်များဟာ အခြားလူများနဲ့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးတာရှားတယ်။ အခြားလူ တိုးတက်မှု အရည်အချင်းရှိမှု
စိတ်ဝင်စားတာထက် သူတို့အရေးလောက်ဘဲ စိတ်မ၀င်စားတတ်ကြပါတယ်။ ယ္ခုအချိန်မှာ ဒီဦးဆောင်မှုဟာ
ခေတ်ဟောင်းပြီးလို့ တတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သု့ေ
ိ သ်ာလည်း တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့
ဌင်းဟာ အကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။Autocratic leaders like to keep the decision-making power to them.
သက်ဦးဆံပိုင် စနစ်ခေါင်းဆောင်များဟာ သူတ့က
ိုိုယ်ပိုင်အဏာထိန်းသိမ်းဖို့ဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။Advantages (အကျိုးတက်ရောက်မှုများ)
ခေါင်းဆောင်များအတွက် ဒီဦးဆောင်မှုစနစ်ဟာ အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်အတွက် ပူပင်စိုးရိပ်မှုကိုနည်းပါးစေခြင်း
ိုိုသူ/မထိန်းချုပ်နိုင်တယ်သိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလျင်မြန်စွာချမှတ်နိုင်တယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ ရှေ့ဆက်သွားဖု့အ
ိ တွက် အခြားလူန့တ
ဲိုင်ပင်ဆွေးနွေးစရာ မရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာ
ဒီလိုစနစ်မျိုးကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်ဒီနေရာမှာရှိသ၍အလုပ်သမားများထုတ်ကုန်များပိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ နိုးဆော်မှုမရှိသော အလုပ်သမားများအတွက် ဒီစနစ်ဟာ အကူအညီဖြစ်စေတယ်။ အကယ်၍ နဂိုစနစ်မဟုတ်ပေမယ့် လုပ်ငန်းကို
အမြန်ပြီးစီး ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာ ဒီစနစ်ဟာ အသုံးဝင်ပါတယ်။Autocratic leadership allows for fast decision-making and can be useful for keep employees
သက်ဦးဆံပိုင်စနစ် ဦးဆောင်မှုမှာ အလုပ်သမားများ နိုးဆော်ရန်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်နှင့် လျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ချဖို့
အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။Disadvantages (ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ)ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသက်တမ်းကြာရှည်စွာမခံသလိုကျော်ကြားမှုလည်းမရှိပါဘူး။ဌင်းစနစ်ဟာအလုပ်သမားအင်အားကိုတစ်ခုလုံးကို အန္တရယ်သက်ရောက်စေတယ်။ ခေါင်းဆောင်က အားလုံးစုံ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့
အဖွဲ့သားတွေကသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အခြားသောဦးဆောင်မှုအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူး။သူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရည်အချင်း နှင့် ဦးဆောင်မှုအရည်အချင်းလည်း ဆုံးရှုံးသွားတယ်။သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ဟာကြာရှည်သည့်အခွင့်အရေးအတွက်မကောင်းဘူး။အလုပ်သမားများအင်အားတက်မှုများကို လျော့ကျစေ။ ပြီးတော့ လုပ်သားတွေက ခေါင်းဆောင်အပေါ် အရမ်းယုံကြည်အားကိုးလွန်းတယ်။
အလုပ်သမားများအတွက် ကုမ္မဏီမှာ ရင်းနီးမြူပ်နံမှု ခံစားချက်များကို ရပ်တန့်စေသည်။ ဒီနစ်ဟာ အဖွဲ့သားများကို
စိတ်အားထက်တန်မှု နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ကျဆင်းစေနိုင်တယ်။
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သောအသုံးဝင်မှုဟာသူ/မခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလျင်လုံးလုံးလျားလျားဖြစ်လာတယ်။အဖွဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်လိမ်မယ်။အဖွဲ့သားတွေက သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ ယုံကြည်စိတ်ချမှု မရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့When to Use it (ဌင်းစနစ်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးဝင်လ)ဲ
Good Times to use this style are: (ဒီစနစ် အသုံးပြုကောင်းအချိန်များ)
•တက်တမ်းတို ၊ ရှုပ်ထွေးသော ၊ စက်မှုလက်မှု (သို့) စီမံကိန်းများ အဆောတလျင် လုပ်ဖို့လိုအပ်သောအချိန်မျိုးမှာ
အသုံးပြုရန်။•အရည်အချင်းနိုမ့်သောအလုပ်နေများ နဲ့အတူ နိုးကြားမှုမရှိတဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုရန်။•အလုပ်သမားများ အထုတ်အနှုတ်လမက္ခဏာမြင့်မားတဲ့နေရာမှာ အဖွဲ့အစည်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့ အသိပညာရှိသော ခေါင်းဆောင်
တစ်ယောက်ရှိရန် အရေးကြီးတယ်။The Democratic Leadership Style (ဒီမိုကရက်တစ် ဦးဆောင်မှုစနစ်)
နေရာပေးတယ်။အလုပ်တာာဝန်ပေးတယ်။ဒီမိုကရက်သစ်စနစ်ခေါင်းဆောင်ဟာအဖွဲ့သားတွေအပေါ်မှုတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝန်ပေးဝေတယ်။သူတို့တုံပြန်ချက်ကိုကြည့်ပြီး အဖွဲ့ သားတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဦးစားပေးတယ်။ ခေါင်းဆောင်ဟာ အဖွဲ့အတွက် နှင့်
သူကိုယ်တိုင်အတွက်အခွင့်အရေးများတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆက်လက်တုံပြန်မှုရှာဖွေတယ်။ဒီစနစ်ကျော်ကြားတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ အလုပ်သမားအင်အား ကောင်းမွန်လို့ ၊ သင့်မြတ်မှုရှိလို့
၊တိုးပွားမှုရှိလို့ ၊ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။Advantages (အကျိုးတက်ရောက်မှု)ဒီမိုကရေတစ်စနှစ်ဦးဆောင်မှုအခြေအနေမှာအဖွဲ့သားများဟာသူတ့အ
ို လုပ်ကိုပိုပြီးနှစ်မြူပ်မှုရှိတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အလုပ်ကိုပြီးအောင်ခွန်အား တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အလုပ်ကို ဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သူတ့ခ
ိုံစားရတယ်။ သူတို့က အလုပ်ရှင် နေရာမှာ
ိုာအလုပ်ကြိုးစားကြတဲ့လူများတွေဖြစ်ကြတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ ဌင်းဟာ သူတို့အသိမှတ်ပြုခံရတယ်သိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုဝေမျှခြင်းဟာ
အတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်မှု အရေအတွက်လျော့ကျစေတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ ရှင်ပြိုင်မှုနည်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်စနစ်ဦးဆောင်မှုဟာရလဒ်ကိုရင်းနီးမြူပ်နံမှုရှိတယ်။သိစွာရှိပြီးအလုပ်ကြိုးစားသောလူနှင့်အပြန်အလုန်ကြည်မှုရှိပြီးထိုရလဒ်အတွက်ဝေမျှခံစားကြတယ်။အကယ်၍အလုပ်သမားများအမှားများကိုဖုံးကွယ်မှုနည်းပြီးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးအလုပ်ရှေ့ဆက်ပြသာနာကိုပိုရိုးသားမှုအတွက်တာဝန်ခွဲဝေမှုသိမယ်ဆိုလျင်
ရှိလိမ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တုံပြန်မှုဆက်လက်ခံရရှိလျင် ရေရှည်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် တိုးတက်မှုရှိမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ပိုပြီးထင်သာမြင်သာမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရှိလိမ်မယ်။
ဒါမှ ၀န်ပိမှုနည်းစေလိမ်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ အလုပ်သမားများဟာ အကျိုးရလဒ်ပေါ်မှာ
ိုိုးတက်မှုအတွက်ရင်းနီးမြုပ်နံရမယ်ဆိုသိပါတယ်။Disadvatages (ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုများ)
လူတိုင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှဆုံးဖြတ်ချက်များချမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်များကြံကြာစေတယ်။အမြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အတွက် အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ၀န်ပိမှုမြင့်မားစေတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့သောကိစ္စအတွက် ခေါင်းဆောင်ဟာ
သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကို ပြောင်းသင့်ရင် ပြောင်းရလိမ်မယ်။ ဒီစနစ်ဟာ ခေါင်းဆောင် တူညီမှုတစ်ခုဖန်တီးရမယ်။ ဦးဆောင်ဖို့ခွင့်ပြု
ထားသောအခြားလူများအကြား နှင့် အရာအားလုံး ရှေ့ဆက်လက် ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် တူညီစွာဖန်းတီးဖို့လိုအပ်တယ်။လူတိုင်းပါဝင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှ ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလျင် အချိန်ကြံကြာနိုင်ပါတယ်။When to use it (ဒီမိုကရက်တစ် စနစ်ဘယ်အချိန်သုံးမလဲ)
အဖွဲ့သားတွေ့ အရေးကြီးသော သူတို့ကိုယ်ပိုင် တီတွင်နိုင်စွမ်း နှင့် အသိပညာတွေ
ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုပါတယ်။ အဖွဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှု နှင့် လေ့ကျင့်ရေးကိုဦးစားပေးခြင်း
အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ လူတိုင်း အကူအညီပေးနိုင်သော အခွင့်အရေးတစ်ခုရဖို့အတွက် အချိန်ယူရတယ်။
ဒီစနစ်ဟာ ရလဒ်အများကြီး ပေးနိုင်မယ်။ ဒီစနစ်ဟာ အရင်ကအတူတူမလုပ်ဖူးတဲ့လူ
၊အဖွဲ့ အသစ်တည်ထောင်ခြင်း ကောင်းတဲ့နည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Bureaucratic Leadership Style (ရှံးဆန်သော ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်)
ရုံးဆန်သောခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ဟာ အလုပ်သမားများအတွက် အဖွဲ့ဝင်တွေက မပြောင်းလဲသောစည်းကမ်းနဲ့အတူ
ခေါင်းဆောင်အသေအချာ စီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဦးဆောင်မှုဟာ စက်ရုံများစတင်တဲ့ခေတ်အခါတုံးက
အရမ်းကျော်ကြားမှုရှိပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ စက်ရုံတွေမှာ တိကျသောဥပဒေ နှင့် နည်းလမ်းများ
ပြောင်းလဲမှုမရှိသောအရည်အသွေး နှင့် အလုပ်သမားများလုံခြုံရေးများအတွက် အာမခံမှုရှိဖို့လိုပါတယ်။
ဒီခေါင်းဆောင်မှုစနစ်အခြေအနေမှာ အခြားအကြောင်းအရာထက် ခေါင်းဆောင်၏နေရာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်အဏာ ပိုရတာဖြစ်တယ်။*Bureaucratic leadership works well in enviroments where following the rules in more important than creativity or
ရုံးဆန်တဲ့စနစ်ဦးဆောင်မှုဟာ တီတွင်နိုင်စွမ်းနှင့် အပြင်က တွေးခေါ်နိုင်ဖို့ထက်
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စည်းမျဉ်းများကောင်းကောင်းလိုက်နာဖို့က ပိုအရေးကြီးတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားများဟာ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲခြင်း သို့ ဦးနောက်အလုပ်လုပ်ပေးခြင်းထက်
မပြောင်းလဲနိုင်သောအဖွဲ့စည်းမျဉ်းများအတွက် လိုက်နာဖို့ ဆုရလဒ် ပိုရလိမ်မည်။ ခေါင်းဆောင်နှင့်အလုပ်သမားအကြား ရှင်းလင်မှု
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုပြီးခန်းနားကြီးကြယ်လိမ်မယ်။ ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်း (သို့) မပါဝင်သေးသောအဖွဲ့အစည်းများ သူတို့ဖွဲ့စည်းပုံ
ဒီစနစ်ဟာအလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ မပြောင်းလဲသော ထုတ်ကုန် နှင့်
အရည်အသွေးများ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ် သီးသန့်ထားတဲ့အချိန် နှင့် တစ်ယောက်ချင်းအပေါ် မှီခိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီဦးဆောင်မှုစနစ်ဟာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဦးစားပေးသောထုတ်ကုန်များတိုးတက်ဖို့နှင့် ဈေးနုန်းဖြတ်ဖို့ သို့
တန်ဖိုးဘယ်လိုဖြတ် ၊ဘယ်လိုတိုင်းတာရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီစနစ်က အကျုံးဝင်တယ်။* Bureaucratic leadership hels promote consistent output and quality, can cut costs, and improve productivity in
ရုံးဆန်သောခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ဟာ မပြောင်းလဲသောအရည်အသွေးနှင့်ထုတ်ကုန်၊ တန်ဖိုးဖြတ်မှု နှင့် တစ်ချို့သောပတ်ဝန်းကျင်
ထုတ်ကုန်စွမ်းအားကို တိုးတက်အောင် မြင့်တင်ပေးတယ်။Disadvantages (ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုများ)
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ထူးခြားတဲ့အလုပ်မရှိ ၊ အလုပ်မှာ ရွေးချယ်လုပ်ဆောင် ပိုင်ခွင့်မရှိ ၊ တစ်ယောက်ချင်း
အခွင့်အရေးကို ဆုံးရုံးတယ်။ အလုပ်သမားများဟာ ကိုပိုင်ဖန်တီးမှု နှင့် ထမံပြောဆိုမှုမရှိတာကြောင့် ရေရှည်မှာ
အဖွဲ့ အစည်းအတွက် အန္ဒရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။*Over time, bureaucratic leadership can de-hunanize and discourage the work force. With
no inverstment in training, you can also end up withoutawell-skilled work force.
ဒီဦးဆောင်မှုစနှစ်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှံးမှု ၊အလုပ်သမားအင်အားကို အာပေးမှုမရှိဘူး။
လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမှာ ရင်းနီးမှုမရှိ ၊ အလုပ်သမားအင်အားစု မရှိဘဲနဲ့
အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ထို့ကြောင့်အလုပ်သမားဌာနကြီး ၊ ဌာနခွဲ ရှံးဆန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် အဖွဲ့ထဲမှာရှင်ပြိုရန်ထက် နှင့်
အခြားသောခေါင်းဆောင်တွေကို အကြမ်းဖက်သမား ၊ နယ်မြေကျော်သူလို့ ရှု့မြင်တယ်။
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နိုင်ငံရေးခံယူချက်များ ၊ ကြီးကျယ်မှု ၊ ကန့်သတ်မှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဌင်းလက္ခဏာများဟာ အပိုင်းများစွာကန့်မှုရှိတာကြောင့် ဆက်သွယ်ရေး သို့ ဆက်ဆံရေးမှာ အများကြီး
ပြသာနာဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။When to use it (ဘယ်အချိန်အသုံးဝင်လ)ဲ
အကယ်၍ ထုတ်ကုန်များပုံမုန်လည်ပတ်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုလျင် ရုံးဆန်သောစနစ်ဟာ
ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကျန်းမာရေး နှင့် လုံခြုံရေး တိုင်းတာပြီးတော့
အန္တရာယ်တွေကို ထိန်းချုပ်ပေးတယ်။The charimatic Leadership style သြဇာတိက္ကမနှင့်ပြည့်စုံသော ခေါင်းဆောင်မှု စနစ်Characteristics (ပင်ကိုယ်လက္ခဏာများ)
ဒီစနစ် သြဇာတိက္ကမနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ အခြားလူတွေကို
လုံဆော်စေတယ်။ သူတို့ကတိပေးတဲ့အလုပ်တာဝန် ရည်မုန်းချက်များ တွေကို အဖွဲ့သားနဲ့အတူလက်တွဲပြီး
တာဝန်ယူတယ်။ ခေါင်းဆောင်ဟာ ရည်မုန်းချက်များကို ကောင်းကောင်းဖန်တီးတယ်ဆိုတာသေချာတယ်။
အခြားလူဆီကနေ ဖြစ်နိုင်သောစွန့်စားမှု အရည်အချင်း ၊ အစွမ်းအစ အကြံအဥာဏ်ရဖို့လိုတယ်။စောင်းပါရိပ်ခြေနာမည်ပေးလိုက်ရင် သြဇာတိက္ကမပြည့်စုံသော ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ဟာ
ခေါင်းဆောင်၏အရည်းအချင်းနှင့်လက်တွေ့များ ပေါ်မှာအခြေခံပြီး အခြားလူတွေကို လုံဆော်
လွမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်။ဒီနစ်ဟာ ကြီးမားသောခွန်အားကုန်မယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ အဖွဲ့၏ မျော်မုန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင်
အကျိုးရှိသော အခွင့်အရေး ရောင်းချဖို့ လိုအပ်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ချို့ဟာ လွယ်လွယ်လေးနဲ့
လုံဆော်လို့ရပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ မရဘူး။ ဒီစနစ်ဟာ အဖွဲ့သားတွေယုံကြည်မှုနှင့်
ရိုးသားမှုပြသနိုင်ဖို့အတွက် ခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာ မှုတည်ပါတယ်။Advantages (အကျိုးတက်ရောက်မှုများ)
သြဇာတိက္ကမ နှင့် ပြည့်စုံသော ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာ
အဖွဲ့အားကောင်းလာတယ်။ သူတို့ ရဲ့ ဆန္ဒ ၊ သိစွာ များ မမျော်လင့် နိုင်တဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကတိပေးတယ်။
ဒီစနစ်ဟာ ခေါင်းဆောင်ကော အဖွဲ့ ပါပါ အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ချင်းစီ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်
တည်ခင်းနိုင်ဖို့အတွက် အားပေးကြတယ်။ အဖွဲ့ကျယ်ပြန့်စွာဖန်တီးနိုင် ၊ စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ထုတ်နိုင်
အသစ်ပေါ်လာတဲ့ပြသာနာတွေကိုတွေကိုလည်း ကြိုတင်စဉ်းစားအဖြေရှာနိင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်များဟာ
ို ဖွဲ့သားရဲ့ကို ကူညီ အားပေးဖို့ ကျန်နေသေးသောအဖွဲ့ သားမျော်မုန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်ဖို့
ို စ်ဦးချင်းစီက ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်သောဆန္ဒရှိတယ်။When to use it (ဘယ်အချိန်အသုံးပြုမလဲ။)
အရေးကြီးသောအဖွဲ့ ရဲ့မျော်မုန်းချက်များအလုပ်လုပ်ဖို့ ကတိပေးတဲ့အခါမှာ ဒီဦးခေါင်းဆောင်မှု
ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ အလုပ်လျင်မြန်မှု ၊ ကြိုးစားမှု ၊ ကုမ္မဏီအသစ် ၊ ဝေစုအသစ် (သို့)
ထုတ်ကုန်မရပ်နားဖို့လိုအပ်တယ်။ အဖွဲ့ သားတွေစိတ်စာတ်ကျတဲ့နေရာမှာ အဖွဲ့အစည်း ပြန်လည်
နုပျိုအောင်လုပ်ပေးရန် အကူအညီပေးသော စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။Leading the team (အသင်းကိုဦးဆောင်ခြင်း)
Team purpose statements (အသင်းရည်ရွယ်ချက် ထူတ်ပြန်ချက်များ)
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာအသင်းတစ်ခုစီဟာကဏ္ဍတစ်ခုစီနဲ့လုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ကုမ္မဏီရဲ့ မျော်မုန်းချက် နှင့် ပန်းတိုင်ပြည့်စုံဖို့အတွက် အရေးကြီးသော တာဝန်သူတို့ဘာ ထမ်းဆောင်ပြီးလဲ
ထို့အပြင်ဘာထမ်းဆောင်ဖို့လိုသေးလဲ။အလုပ်အခြေအနေဌင်းအဆင်ပြေ ပြည့်စုံတဲ့အဖွဲ့ဆိုလျင်မကြည့်ဘဲလွတ်ထားလို့ရတယ်။အပေါ်မှာမြောက်များမှုတည်ပါတယ်။Team statements take the organizations' mission and vision statements and make them
relatable to your team members onapersonal level.
အဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များဟာအဖွဲ့ အစည်း၏မျော်မုန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင်ကိုဦးတည်တယ်။သူတို့ကမင်း၏အဖွဲ့ ၀င်များ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဆက်နွယ်နိုင်တယ်။ဌင်းတစ်ခုချင်းစီဟာ
အလုပ်သမားကြားမတ်မျဉ်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားတယ်။ထို့ကြောင့်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်နှင့်အလွှာမြောက်များစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် မင်းအဖွဲ့ နှင့် ရုံးချုပ်အဖွဲ့ ၏အကြားမှာ ပိုင်းခြားမှုရှိတယ်။ သီးခြားသောအဖွဲ့ နှင့် ကုမ္မဏီဟာ အနည်းငယ်ဘဲ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိတယ်။ ကုမ္မဏီမှာ
မင်းအဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ပြန်ချက်များ မင်းဖန်တီးပေးရမယ်။The power of purpose (အခွင့်အဏာ၏ ရည်ရွယ်ချက်)
အခြားလူတွေကို ဦးဆောင်မှုလိုအပ်ခြင်းဟာ တစ်နေရာရာရောက်ဖို့ မင်းက သူတ့က
ိုို ဦးဆောင်ခြင်းဘဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ မျော်မုန်းချက် နှင့် ပန်းတိုင် ထုတ်ပြန်ချက်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွက်ပန်းတိုင်
၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခု ရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ပြန်ချက်များနဲ့ အတူတူအမှုထမ်း သီးခြားသောအလုပ်တာဝန်အတွက်
ယူနစ်တစ်ခုအတွင်းမှာ တည်ဆောက်ပုံ အားလုံးပါဝင် ရမယ်။ မင်းရဲ့အလုပ်သမားများကို အဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်
ထုတ်ပြန်ချက်များကို ရှင်းပြရမယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာဘဲ အဖွဲ့ အစည်း၏ ဆက်လက် အောင်မြင်အောင်
ို ယ်လုပ်ရမယ်လဲဆိုတာ နားလည်အောင် ပြောပြ ရမယ်။ အဲလိုပြောဆို ရှင်းပြမှ အရေးကြီးသော
ကုမ္မဏီ၏ ပန်းတိုင်ကို ဆက်သွယ်နိုင်လိမမ
် ယ်။ အကယ်၍ ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခရ
ဲ့ င် အဖွဲ့တစ်ခု၏
ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အတူတကွရောက်ဖို့ ၊ အဖွဲ့အတစ်ခုလုံး ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ဖို့ နှင့်
စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိမယ်ဆိုလျင် အသင်းအဖွဲ့အတွက် တစ်စုံတစ်ခု လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များ အဖွဲ့ ၏ယူနစ်ကိုသီးခြားခွဲထားတယ်။ သူတို့က အဖွဲ့ ကိုနိုးဆော်ဖို့
မင်းကိုအခွင့်ပေးတယ်။ သူတို့ အဖွဲ့ ကို ဦးဆောင်ဖို့ အသုံးဝင်သောလက်နက်ကို မင်းလက်ထဲ အပ်လိုက်တာ
ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့တစ်ခု ရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ အလုပ်သမားအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဌင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ
ခေါင်းဆောင်အတွက်လည်း အကျိုးတက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဌင်းခေါင်းဆောင်မှုလက်နာဟာ အရာတစ်ခု မုန်အောင်
သင်ညွန်ကြားဖို့ လိုအပ် တဲ့အခါမှာ မင်းကိုပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းဟာ ကျော်ကြားမှု ဖြစ်ချင်ဖြစ် လိမ်မယ်။
သို့သော် မှုဝါဒများ နှင့် ပေါင်းစည်းလိုက်သောအခါမှာ တစ်နည်းအားဖြင့် ကန့်သတ်မှု နှင့် မလိုအပ်မှုများ
သင်ရဲ့အဖွဲ့သားများက သင်ယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။Creating the team purpose statement အသင်းအဖွဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ထုတ်ပြန်ဖန်တီးခြင်း
အဖွဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ပြန်ချက် ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတူလိမ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဌင်းအကြောင်းရင်းမှာ အဖွဲ့အတွက်လွမ်းမိုးအောင်လုပ်နိုင်ပြီး တစ်ချို့ဟာ အဖွဲ့အတွက်
မဖြစ်နိုင်သောခြေလှမ်းများရှိတယ်။။ ဒါပေမဲ့ သတိရမဲ့တော့ချက်ကတော့ ဌင်းထုတ်ချက်မှာ
နိုး/လုံဆော်သင့်တယ်။ လူ သို့ အဖွဲ့ ကို ဝေဖန်ပြစ်တင် သို့ ဆုံးမရိုက်နက်ခြင်းမပြုရပါ။ ဌင်းရည်မုန်းချက်
ထုန်ပြန်ချက်ထုတ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်နိုင်တာကိုဘဲဖော်ပြသင့်တယ်။ မလုပ်နိုင် မရောက်နိုင်တာကို မဖြစ်သင့်ဘူး။
ဌင်းရည်ရွယ်ချက်များဟာ အဖွဲ့ တစ်ခုလုံး မွေးမြူ သို့ စုစည်းထားသော အကောင်းဆုံးအချက်အလက်များမှာ
ဖြစ်သင့်တယ်။ အကယ်၍ လိုအပ်သောခြေလှမ်းများ ပြည့်စုံစွာဖန်တီး ထုတ်ပြန်နိုင်မယ်ဆိုလျင် အဖွဲ့ သားများက
မင်းအသင်းအဖွဲ့ နှင့် ကျန်ခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများ ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာ စတင်ဖော်ထုတ်ပါ။
အထူးသဖြင့် မင်းအဖွဲ့ က ဘာအဖွဲ့လဲ။ မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ထက် ကောင်းအောင် သင်ဘာလုပ်မလဲ။
ပြိုင်ဘက်မရှိဘဲ အတွင်းထဲရှိတဲ့ မင်းရဲ့ဖောက်သည်ဖြစ်မယ်ဆိုလျင် ဌင်းက မင်းကိုဘယ်လိုဂုဏ်ယူမှုရှိသလဲ။
မင်းရဲ့အလုပ်ဟာ အဆင့်အတန်း ရှိရမယ်။ ရောက်နိုင်သောအတိုင်းအတာရှိရမယ် သု့မ
ိ ဟုတ် အချို့သော
အခြားအောင်မှုများမှာ မင်းတို့နဲ့ အတူတကွ ရှိရမယ်။
*ရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ပြချက် စတင်ဖန်တီး ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် မင်းရဲ့အသင်းအဖွဲ့က ပိုကောင်းအောင်
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မင်းပြိုင်ဘက်ထက်ကောင်းအောင် သင်ဘာလုပ်မလဲ သို့ မင်းရဲ့သီးခြားသောဂုဏ်ယူမှုက
ဘာလဲ။နောက်ထပ်စဉ်းစားရမဲ့တစ်ခုက မင်း၏ အသင်းအဖွဲ့ က တစ်ကယ်ဘာလုပ်ဆောင်ရမလဲ။
ပထမဦးဆုံးဖြောင့်တန်းစွာ ရှေ့တိုးနိုင်တဲ့ပုံတွေ့လား။ အကယ်၍ သင်ဟာဈေးကွက်မှာ ဦးဆောင်မယ်ဆိုလျင်
ဈေးကွက်လို့ ရိုးရှင်းအဖြေပေးလို့မရပါဘူး။ သို့ အကယ်၍ မင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ
သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးသူဖြစ်မယ်ဆိုလျင် မင်းရဲလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ကုမ္မဏီအလုပ်သမားများကို
ို ကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်အောင် အသိပညာ နှင့် စွမ်းရည်များကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်ရဖို့ အချိန်ခက်ခဲမယ်ဆိုလျင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို
မေးခွန်းထုတ်ရလိမ်မယ်။ အကယ်၍ မင်းအလုပ်ကို ရပ်လိုက်မယ်ဆိုလျင် ဘာဖြစ်လာမလဲ။
ဘယ်လိုအရည်အချင်းနဲ့ ကုမ္မဏီရဲ့ ပန်းတိုင်ကိုတွေ့နိုင်မလဲ။ ဥပမာ---အကယ်၍ ဈေးကွက်မှာ ရပ်သွားရင်
ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ ကျန်တဲ့အလုပ်သမား နှင့် သူတ့၏
ို အရည်အချင်း ၊ သူတို့ကိုယ်ပိုင် အခန်း ကဏ္ဍာလုပ်
ဆောင်ချက်မှာ ဘယ်လို အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလဲ။ ကုမ္မဏီရဲ့ အနာဂတ်ဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလဲ။
နောက်ဖောက်သည်များကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ အကယ်၍ မင်းလုပ်ဆောင်မှုများရပ်တော့မည်ဆိုလျင် ဘာအထုံး
၊ အကျစ် ဘာတွေဖြေရှင်းရမလဲ သင်စတင် တွေ့တဲ့အချိန်မှာ သင်ရဲ့ အလုပ်က အသင်းအဖွဲ့စည်းကို
ဘာတွေဖြည့်စွက်လဲဆိုတာ ဌင်းက မင်းကိုထိုးတွင်းဥာဏ်ပေးလိမ်မယ်။အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုမှာ အမုန်တကယ်မင်းရဲ့လုပ်ငန်းက ဘာလဲမေခွန်းထုတ်ရင် တစ်ချို့သောအဖြေမှာ
ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မင်းထင်သလို အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။
အခုမင်းအသင်းအဖွဲ့ မှာ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ အတွေးအခေါ်ရှိပြီး ၊ လုပ်ရမဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပြီး
သူတို့ နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ အဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက် အကောင်းဆုံးစံပြဖြစ်အောင် သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏
အောင်မြင်မှု သို့ တိုးတက်မှုကို ဘယ်လိုတိုင်းတာရမလဲဆိုတာ အရိပ်နိမိတ်တစ်ခုပေးသင့်တယ်။ အဖွဲ့ ၏
ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ အတူလုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန် နှင့် ရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတာ
သင်သိပါတယ်။ မင်းရဲ့အသင်းအဖွဲ့ နဲ့အတူ တစ်စုံတစ်ခု အကြောင်းရှိလိမ်မယ်။ တစ်စုံတစ်ခု
သူတို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာ ရင်းနီးမြူနှံမှုရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ……အကယ်၍ သင်ဟာ
အသင်းအဖွဲ့ ကို ပြည့်စုံစွာဦးဆောင် မယ်ဆိုလျင် အဖွဲ့ရဲ့ နမှုနာတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် အောင်မြင်သော ကျနော်တို့ဖောက်သည်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် နှင့်
ရှေ့တောင်ကမ္မဏီမှ ဦးဆောင်သော ကျနော်တို့၏အဖွဲ့အစည်းဟာ ဖောက်သည်များကို မြန်ဆန်မှု ၊ မုန်ကန်တိကျမှု ၊ သူတို့၏
ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ချ မှာယူမှုနဲ့အတူ ကျနော်တို့ နေ့တိုင်း ဖြည့်စွက်ဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။Forming ပုံသွင်းခြင်း ၊ Storming သွန်းပို့ခြင်း ၊ Norming စံသတ်မှတ်ခြင်း ၊ Performing လုပ်ဆောင်ခြင်း သုိ့
သီးခြားသောနေ့ သို့ နေ့ထူးနေ့မြတ်များမှာ ဘယ်သမ
ှူအလုပ်လေ့လုပ်ထမရှိပါဘူး။ အကယ်၍
မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ချင်တယ်ဆိုလျင် မင်းရဲ့အကူ ၊ ဖောက်သည် ပြန့်ကျဈေးသည် တစ်ယောက်နှင့်အတူ
အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ ထဲတွင် သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍာမှာ မပါသော်လည်း
အဲ့သလိုမင်းလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်မှု နေရာမှာ ဖြစ်ဖို့အလားအလာပိုရှိတယ်ဆိုတာ
အသင့် သုိ့ ကြိုတင်မျော်လင့်လို့ရပါတယ်။ အကယ်၍ မင်းအဖွဲ့ အစည်း အသစ်တည်ထောင်မယ်ဆိုလျင်
ဌင်းဟာ တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပါဝင်သောစိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုမှာ လူတွေဟာ
ပထမဦးဆုံးအတူတကွ ဆုံတဲ့အချိန်မှာ အတူတကွလုပရ
် မဲ့လုပ်ငန်း ကွေ့ကောက်မှု လေ့လာတာ သမက
ို ည်း လေ့လာပါတယ်။
၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ စိတ်ပညာရှင် Bruce Tuckham ဟာ ပုံသွင်းခြင်း ၊ သွန်းပို့ခြင်း ၊ စံသတ်မှတ်ခြင်း နှင့်
လုပ်ဆောင်ခြင်း များကို ၁၉၆၅ မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အသင်းအဖွဲ့ တိုင်း ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဌင်းအဆင့်များကို
ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ကျေကွဲခြင်း ထပ်ပေါင်းထည့် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ တစ်ခုမှာ
အတူတကွလုပ်ခြင်း နှင့် ခွဲခွာခြင်း ဘယ်လအ
ို ဆုံးတတ်ရမလဲဆိုဖေါ်ပြပါတယ်။ဌင်းကြေကွဲခြင်းလို့ လဲခေါ်ကြ
အဖွဲ့တိုးတက် မှုနောက်ဆက်တွဲအဆင့်များမှာ အတူတကွလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သတိပြုရမဲ့အဆင့်များကတော့ တစ်ခုခြင်းစီ ဘာတွေပါဝင်ရမလဲ ၊ အဖွဲ့ သစ်တစ်ခုကို အပေါ်
အအောက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် နှင့် အဖွဲ့သစ်တစ်ခုမှာ ပုံသွင်းခြင်းဟာ ခက်ခဲသောရှုထောင့်များဖြစ်တယ်ဆိုတာ
သေချာနားလည်မယ်လို့မျော်လင့်ပါတယ်။ ပထမ Bruce Tuckman က forming, storming, norming and
performing ၁၉၆၅ မှာဌင်းအဆင့် သို့ ဇာတ်ခုံ များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ပိုတိကျတဲ့
နောက်ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အဆင့်ကတော့ adjourning ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဖော်ပြချက်မှာ
အဖွဲ့တစ်ခုအခြေအနေ အတူတကွလုပ်ဖို့ နှင့် အခြားအလုပ်ကိုဆက်သွားဖို့ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့
အစိပ္ပါယ်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။Forming ပုံသွင်းခြင်း သို့ တည်ထောင်ခြင်း
ပုံသွင်းခြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်စင်ထဲမှာ လူတိုင်းသူတို့အကောင်းဆုံး ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုဖြစ်ချင်ကြတယ်။
လူတိုင်းဟာ ယာဉ်ကျေးတယ်၊ စိတ်အားထက်တန်တယ်။ အဖွဲ့အသစ်အဖုိ့ အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်
အမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ ထင်မြင်ချက်များကို ပေးလေ့ရှိတယ်။ အခြားလူတွေက အဖွဲ့ အတွက်စိုးရိပ်မှု
နှင့် အသင်းအဖွဲ့ကဘာလဲ ၊ သူတို့က ဘယ်ကဏ္ဍမှာ ဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားတတ်ကြတယ်။
သူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော မင်းအကြောင်းစဉ်းစားကောင်း စဉ်းစားပါလိမ်မယ်။ သင်ဘယ်ခေါင်းဆောင်မျိုးလဲ။
အဖွဲ့အပေါ်မင်းဘယ်လိုတုံပြန်မှုရှိမလဲ ၊ သင်န့သ
ဲ က်တောက်သက်သာမှုရှိသလား စသည်ဖြစ် ဆင်ခြင်
ကြလိမ်မယ်။ဒီအသင်းအဖွဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မင်းအခန်းကဏ္ဍဟာ ခေါင်းဆောင်
တစ်ယောက်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ ဌင်းလည်းသြဇာကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းက မင်းကို
ရှင်းလင်းစွာ ဖြစ်ချင်ပါလိမယ်။ အသင်းအဖွဲ့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကိုင်သွယ်ဖို့ တစ်ခုရှိရမယ်။ မင်း ယုံကြည်မှု ၊
ရိုးသားမှု နှင့် နားလည်မှု တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် အသင်းအဖွဲ့ ၀င်များဟာ သူတ့က
ျိုရာ အခန်းကဏ္ဍ
ကိုအကောင်းဆုံး လုပ်ကြပါလိမ်မယ်။*Forming phase: The getting to know you stage. Everyone is trying to figure out how the team
will work, what their roles will be, and what kind of leader you will be.
ပုံစံသွင်းခြင်းအဆင့်မှာ မင်းရသောအခန်းကဏ္ဍကို သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအအဖွဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ သူတို့
ကဘယ်အခန်းဏ္ဍာကလဲ ၊ မင်းက ဘယ်ခေါင်းဆောင်မျိုးလဲ ဆိုတာ သိဖို့ကြိုးစားကြပါလိမ်မယ်။ဒီအဆင့်မှာ သိမ်မကြာဘူး။ အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်းမှာ သို့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် နည်းလမ်း နှင့်
အခန်းကဏ္ဍရေးဆွဲ ဘယ်လိုစီမံရမလဲဆိုတဲ့အချိန် အတောတွင်းမှာဘဲကြာပါလိမ်မယ်။ အဖွဲ့ ဒုတိယ
အဆင့်storming မသွားမီဖြစ်ပါလိမ်မယ်။Storming တင်းသွန်းခြင်း သို့မဟုတ် သွန်းပို့ခြင်း
ဒီသွန်းပို့ခြင်းဟာ ပျားရည်ဆမ်းခရီး ပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အဖွဲ့ ၀င်တွေက မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်
သို့ အမိန့်အဏာ အပြစ်ရှာမျိုး စသည့် စိန်ခေါ်မှုတွေ တွေ့ရလိမ်မည်။ တစ်ချို့လူတွေက သူတ့က
အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်း ၊ အလုပ်အတိုင်းအတာဘယ်လိုလုပ် သို့ ဌင်းနည်းလမ်း အလုပ်ပြီးတယ် စသည်ဖြစ်
ဖော်ပြလိမ်မယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဖွဲ့ဝင်များမေးခွန်း သုိ့ သူတို့ ဘာအချိန်ပြုန်းတီးခဲ့လဲ စသည့်ခံစားချက်များကို
မင်းကြားရလိမ်မယ်။ အဖွဲ့ဝင်ထဲ သဘောထားကွဲလွဲမှု ၊နေရာလွတ်မှု ဖြစ်လာလိမ်မယ်။
ဒီအဆင့်ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာ မင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုများ တော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍
အဖွဲ့လွန်ခဲ့တာတွေ သို့ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ မင်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလျင် အဖွဲ့ ကျဆုံးမှု သုိ့ ကြာရှည်စွာရုန်းကန်မှု ၊
နောက်ဆုံးအထိသွားဖို့ ခွန်အားမရှိတာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ၊ အဖွဲ့ မျော်လင့်ခဲ့သော
အပြုအမှုများကို ပြန်ညွန်ကြားဖို့ ၊ ပြတ်သားသော ကအခန်းဏ္ဍများ၊ ရှေ့ဖြောင့်ဖြောင့်သွားနိုင်အောင်
ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတစ်ခု ညွန်ကြားဖို့ လိုအပ်လိမ်မယ်။ လိုအပ်သလိုတာဝန်ပေးဖို့ သို့ လိုလိုလားညှိယူဖို့မှာ
ဒီအဆင့်မှာ အဆင်ပြေဖို့လိုပါလိမ်မယ် ။ သူတို့အာလုံး ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကို မွေးပြီးတော့
အဖွဲ့တည်ဆောက်ထားပုံ မှုရင်းအတိုင်း ပြန်ပြောင်းလိုကပ
်ါ။ သူတို့လမ်းမပိတ်ခင် တိုင်တန်းချက်များကို
မိန့်ကြားပါ။ သူတို့ တိုးတက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ ၊အောင်မြင်မှုများ ဆုချီးမြင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို
*Storming phase: reality sets in. The team may question you, your decisions, or the point of
what they are doing. Your leadership skills must come into play here in order to move the team
past this phase.
အဖွဲ့တွေက မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ သူတ့ဘ
ိုာတွေလုပ်နေလဲ ဆိုတာ မင်းကိုမေးခွန်း ထုတ်လိမ်မယ်။
ဒီအဆင့်မှာ အဖွဲ့လွန်ခဲ့တာ သို့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှု ၊ နေရာလွတ်မှုများကို မင်းခေါင်းဆောင်မှု
အရည်အချင်း ဒီနေရာမှာ စွမ်းဆောင်ချက် သို့မဟုတ် သွန်းပို့ ရမည်။Norming (စံ၊သတ်မှတ်ချက်)
သွန်းပို့တဲ့အဆင့်မှာ လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် သဘောထားကွဲလွဲမှုအခြေအနေကို ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့အဆင့်မှာ
အဖွဲ့ကို စံ အဆင့်ထဲသို့ ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ရာထူးဂုဏ်သိမ်အဆင့်အဆင့် တည်ဆောက်တဲ့ဒီအဆင့် နှင့်
အသင်းအဖွဲ့၏ အခွင့်အာဏာကို အဖွဲ့သားတွေဆီ ဦးဆောင်ဖို့လက်ခံခြင်း နှင့် အဖွဲ့ အတွင်းမှာ
ိုိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍများအပေါ်မှာ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ယ္ခုအချိန်ကစပြီး အဖွဲ့သားများဟာ တစ်ယောက်န့တ
ဲ စ်ယောက် ကောင်းကောင်းစတင်သိခွင့် ရှိတယ်။
ဲ စ်ယောက် သူတ့ခ
ို င်မင်ရင်းနီးမှု စတင်လိမ်မယ်။ သူတ့တ
ို စ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက်
အကူအညီတောင်း သို့ ကြိုးစားအထုတ်မှု နှင့် သူတ့က
ိုို ဝေဖန်မှု ဆိုင်ရာအချက်များလည်း ပိုပြီးလက်ခံတဲ့
Norming Phase: In this phase the team has accepted your authority and has begun to get to know each other. They
request help and accept constructive criticism. Your leadership role is to reinforce their commitment to the team goal
and to monitor for any slips back into storimng behavior.
ဒီအဆင့်ဟာ မင်းရဲ့အခွင့်အဏာကိုလက်ခံခဲ့ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စတင်သိခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို
အကူအညီတောင်းခြင်း နှင့် အပြုသဘောဆောင်သော ဝေဖန်မှုများကိုလည်း လက်ခံတယ်။ သဘောထားကွဲလွဲမှု သွန်းပြုိ့ ခင်းအဆင့်ထဲ
သို့ ပြန်မသွားနိုင်အောင် စောင့်ကြည့်ခြင်း နှင့် မင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍဟာ အသင်းအဖွဲ့ ပန်းတိုင်ဆီကို
သူတို့ကတိပေးပြီးသောအလုပ် ပိုခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သီးခြားသောအဖွဲ့သားများ အဖွဲ့၏ပန်းတိုင်အားလုံးကို စတင်ထိန်းသိမ်းပြီး မင်း၏ အလုပ်ကို ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း
ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းတိုင်းလမ်းပေါ်ကိုအပြီးသတ် ရှေ့ဆက်ဖို့ လမ်းညွန်ခြင်း ၊ ရှေ့ဆက် အမှားနည်းအောင်
Storming ဆိုသော သွန်းပို့ခြင်း နှင့် forming ဆိုတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက် အဆင့်များကြားမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို
သတိပြုရမယ်။ အဖွဲ့သား အချို့တွေဟာ စိန်ခေါ်မှုအသစ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ သို့ အရင်က ဒီလိုကိုင်သွယ်ပုံစံ မခံစားခဲ့ဖူးဘူး ဆိုရင်
storming အဆင့်ကို ပြန်လှည့်ကောင်း ပြန်လှည့်လာပါလိမ်မည်။ storming အပြုအမှုစရှိက်ထဲသို့ နောက်ပြန်မလှည့်အောင် သို့ ပြုမှု
ကြိမ်နှုန်း နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် အချိန်အတိုလေးအတွင်းမှာ မင်းဂဂုစိုက်ရမယ်။Peforming လုပ်ဆောင်ခြင်း
ဒီအဆင့်မှာ အချက်အလက် နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့၏ပန်းတိုင် ရည်မုန်းချက်ရောက်ဖို့နဲ့အတူ
သဘောတူထားသော နည်းလမ်းအပေါ်မှာ သူတ့လ
ိုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ တည်ဆောက်ပုံ ၊ နည်းလမ်းများ ၊
စနစ်များ တည်ခင်းလိုက်ရင် ဌင်းဟာ အသင်းအဖွဲ့ရဲ့ ယာဉ်ကျေးမှုတွေဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့သားတွေကို အသစ်ခေါ် သို့မဟုတ်
အဟောင်းတွေကို ပယ်ထုတ် နိုင်တယ်။ သု့ေ
ိ သာ် လုပ်ငန်းအမြဲတမ်းလည်ပတ်နေရမယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ ယာဉ်ကျေးမှုဖြင့်
တည်ဆောက်ထားလြုိ့ ဖစ်ပါတယ်။Peforming Phase: Your team is now operating likeawell-oiled machine. You can delegate work and know it will be
done well. You can focus on individual team-member development, which will help to prepare the team members for
leaving the team.
လုပ်ဆောင်ခြင်းအဆင့်:: ယ္ခုမင်းရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဟာ ဆီကောင်းထည့်သော စက်တစ်စီးကဲ့သို့ လုပ်ငန်း လည်ပတ်နေတယ်။မင်းအလုပ်တာဝန်ကောင်းမွန်စွာ ပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုတာ သိရလိမ်မယ်။ အဖွဲ့အတွင်းမှာ မင်းထွက်သွားခဲ့လျင် အဖွဲ့အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့
သူတို့တစ်ဦးချင်စီတိုးတက်မှုကို မင်းအာရုံစိုက် နိုင်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်မှာ မင်းရဲ့အဖွဲ့တွေက လွယ်လွယ်ကူကူ သွားနေတာကို ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် တွေ့ရလိမ်မယ်။
အလုပ်ကောင်းမွန်စွာပြီးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ကြီးမားတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတိုးတက်မှုအပေါ်ကိုလည်း
အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့အချက်အလက်များကို သင်လေ့လာပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ိုိုးတက်တဲ့ဟာကိုဘဲ ပြသတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ အသင်းအဖွဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ထိ
တိုးတက်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။Adjourning or Mourning Phase ရွေ့ပြောင်းခြင်း သို့ ၀မ်းနည်းခြင်း
အသင်းအဖွဲ့အားလုံးဟာ ယာယီဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက ရာထူးတိုး ၊ ပင်စင်ယူ၊ အခြားဌာန သို့ အခြားအဖွဲ့အစည်းကိုပြောင်း
ထွက်သွားကြတယ်။ အဖွဲ့အစည်းဟာ ဦးစားပေးရာကို ပြောင်းတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ဖွဲစည်းပုံဟာ တားစည်းခြင်း မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်
Adjourning or Mourning phase။။ the team recognizes that their time together is coming to an end. Your rolerevolves areound helping each individual move on to their next position or role.
အသင်းအဖွဲ့ဟာ အတူဆုံဆည်းတဲ့အချိန် ကုန်ဆုံးလာတာကို သတိပြုမိကြမှာပါ။ မင်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပြောင်းလဲမှုကတော့
ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီကို သူတ့ရ
ိုဲ့ နေရာ သို့ အခန်းကဏ္ဍ နောက်တဆင့်ပြောင်းနိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပြောင်းလဲမှု မကြိုက်တဲ့လူ သို့ အခြားအဖွဲ့ဝင်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အဖွဲ့ရဲ့ဖြေရှင်းမှုဟာ
အလွန်ခက်ခဲမှု ရှိနိုင်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်တွေက ဆက်လုပ်ဖို့ မသေချာတဲ့လူ သို့ အလုပ်တာဝန် အခန်းကဏ္ဍရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိတဲ့လူ
ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါလိမ်မည်။ ဒီလိုအဆင့်မှာ စိုးရိပ်မှုတစ်ချို့မျော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အကယ်၍ အရှေ့တွင်
အသင်းအဖွဲ့အပေါ်မှာ တိုးတက်ဖွဲ့ ဖြိုးမှု လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် စိုးရိပ်မှုပြေပျောက်စေ နိုင်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းပြီးလို့ အခြားအဧရိယာ
အလုပ်မှာ သို့မဟုတ် နောက်တစ်ဆင့် လုပ်ဖို့အတွက် သူတို့အတွက် မင်းပြင်ဆင် နိုင်ပါတယ်။
Your Approach during Each Phase တစ်ဆင့်ချင်းစီ အတွင်းမှာ မင်းရဲ့ ချည်းကပ်မှု
မင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှု ကူညီဖို့အကျဉ်းချုပ် အခန်းကဏ္ဍ နှင့် အဖွဲ့၏ တိုးတက်မှု တစ်ဆင့်ချင်းစီ ချည်းကပ်ဖို့အတွက် အောက်ပါ
ပြထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ။ ဌင်းအဆင့်များဟာ အဖွဲ့၏တိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံပြီး ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသော
အချက်များဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းအချက်များကိုအသုံးပြုပြီး မင်းရဲ့အသင်းအဖွဲ့ ရှေ့သို့ရွေ့ဖို့ ကူညီရန်
လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။PhaseYour GoalFormingProvide clear direction
ရှင်းလင်းသော ညွန်ကြားမှု စီစဉ်ပေးပါ။
Begin defining roles
တည့်ကျသော ဥဒေစည်းကမ်း စတင်ပါ။
Form team purpose
Begin working to establish trust and display integrity
ယုံကြည်မှုနှင့်ရိုးသားမှုကိုပြပြီ အလုပ်လုပ်ခြင်းကို စတင်ပါ။StormingEstablish team structures and reporting relationships
အသင်းအဖွဲ့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ နှင့် အစီရင်ခံ ဆက်နွယ်မှုများ။
Address challenges to your authority or to the team
အဖွဲ့ပန်းတိုင်/ရည်ရွယ်ချက် သို့ မင်းရဲ့အခွင့်အဏာ ရင်ဆိုင်ရသည့် စိန်ခေါ်ချက်များ။
Establish processes, procedure, and polices
ရှေ့ဆက်တည်ဆောက်မှု ၊ နည်းလမ်းများ နှင့် ပေါ်လစီများ။
ခွဲထုတ်ခြင်း နှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့် သဘောထားကွဲလွဲချက်များ။
Make corrective changes as needed
လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများကို မှန်ကန်အောင် တာဝန်ချမှု။
အပြုသဘောဆောင်သော အပြုအမှုများကို အားပေးခြင်း။NormingEncourage team members to give and take gauidance from each other
အဖွဲ့သားတွေကို တစ်ယောက်မှအခြားတစ်ယောက် လမ်းညွန်မှု အကူအညီပေးမှု
Recognize positive contributions
Arrange team-building activities when appropriate
သင့်လျော်သောအချိန်မှာ အဖွဲ့လုပ်ရှားမှုများ စီစဉ်ပေးပါ။
Encourage team members to take leadership of certain tasks or activities
အဖွဲ့ဝင်များကို အလုပ်များခေါင်းဆောင်မှုတာဝန်ယူဖို့ သို့ လုပ်ရှားမှုများကိုအားပေးပါ။
Fine tune procedures, polices, and roles as needed
သယာသောနည်းလမ်းများ ၊ပေါ်လစီများ နှင့် စည်းကမ်းများ လိုအပ်တယ်။PerformingDelegate responsibility to team members
အဖွဲ့သားများကို အလုပ်တာဝန် ခွဲဝေပေးဖို့။
Encourage continuing achievement and high performance
မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှု နှင့် အောင်မြင်မှုကို ဆက်လက်အားပေးခြင်း
Focus on individual team member development and begin thinking about
future beyond the team
အဖွဲ့သားတစ်ဦးချင်းစီ တိုးတက်မှု နှင့် အဖွဲ့ထက်ပိုလွန်၍ အနာဂတ်ကို
စဉ်းစားခြင်းကို အာရုံစိုက်ပါ။AdjourningCelebrate team and individual achievement
အဖွဲ့ နှင့် တစ်ဦးချင်းစီအောင်မှုများကို ကျင်းပပေးပါ။
Solicit lessons learned from team members
Assiste team members in transitioning to new positions or new roles
အဖွဲ့သားများနေရာအသစ်ကူးပြောင်းဖို့ သို့ စည်းမျဉ်းများကို ကူညီပါ။•ဒီအဖွဲ့ သုိ့ အခြားအဖွဲ့ ဆက်လက်ဦးဆောင်ဖို့ အသင်းအဖွဲ့ ဟာ ဘယ်အဆင့်ထဲမှာ ရှိနေလဲ
နောက်တစ်ဆင့်ပြုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ စသည့်အချက်များကို မင်းကောင်းမွန်စွာဖော်ထုတ်ရလိမ်မယ်။
အဲလိုလုပ်ဖို့ အတွက် အချက်အလက် အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။•အဖွဲ့ အလုပ်လုပ်ခြင်းအပေါ် သီးခြားသောရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုများ နှင့် အဖွဲ့ သားများကို
လမ်းညွန်မှုကိုအတွက် အချိန်ဇယားလုပ်ထားပါ။•အကယ်၍ တည်ဆောက်ပုံများ ၊ ပေါ်လစီများ သို့ ကျင့်သုံးချက်များ
ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုလျင် လိုလိုလားစမ်းစစ်ရမယ်။•မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအ တိုင်းအတာအတွက် ဌင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီးတော့ ပန်းတိုင်ကို
တစ်ဆင့်မှ တစ်ဆင့်သို့ ရွေ့ဖို့ လက်တွေ့ရှိရမယ်။•မင်းအသင်းအဖွဲ့ ကိုလုပ်ကျွေးသောလူများနှင့်အသင်းအဖွဲ့ တုံပြန်ချက်များကိုရှာပါ။
တိုးတက်ဖို့နည်းလမ်းများကိုကြည့်ပြီးတော့ တစ်ဦးချင်းစီတိုးတက်မှုကို ဆုချပါ။Delegating လုပ်ပိုင်ခွင့်လွဲအပ်ခြင်း
Delegation လုပ်ပိုင်ခွင့်လွဲအပ်သူ။ ။ ထိုစကာလုံးက ခြားနားတဲ့လူအတွက် ခြားနားတဲ့ပုံရိပ်ကို ဖော်ပြတယ်။ သို့သော်
ခေါင်းဆောင်မှုတက်တမ်းမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်လွဲအပ်ခြင်း အရေးကြီးသောအရာတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ
ပထမတစ်ခုမှာ ဆိုရိုစကားအရတော့ မင်းဟာ တစ်ဦးတည်းသော လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ကို
အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ တာဝန်ခွဲမဲ့ လက်ထောက်တစ်ယောက် သေချာလိုအပ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လက်ထောက် သို့
ကိုယ်စားလှယ် လေလ့လာတဲ့အခါမှာ အချိန်ကိုကောင်းမွန်စွာစီမံ နိုင်သောစွမ်းရည်ကို မင်းအမှန်တစ်ကယ်စင်စစ်
လေ့ရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းအသင်းအဖွဲ့အတွက် ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတာ မင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကဲ့သို့ မြင်နိုင်မှ
အခြားသောအဖွဲ့သားဆီကို မင်းလက်ကမ်း နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့အတွက် ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲမြင်နိုင်ဖို့
နှင့် ဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်း တာဝန်လွဲအပ်နိုင်ပြီးဆိုရင် သင်ဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး။ဒုတိယ တစ်ခုကတော့ တစ်ကယ်စစ်မုန် တင်မြောက်ထားသော ခေါင်းဆောင်များဟာ
အခြားလူတိုးတက်ဖို့အတွက် ကူညီရာမှာ တစ်ကယ်လက်နက်ကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မင်းကိုယ်စားလှယ် သို့
တာဝန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ မင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော လူတစ်ယောက် အလုပ်နှင့်အတူ အခွင့်အရေး ပါပါ
ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကျွမ်းကျင်မှုအသစ် ၊ရှိနေပြီးသောစွမ်းရည်ကို ပိုတိုးတက်အောင် ၊အသင်းအဖို့
တာဝန်အသစ်ဖော်ဆောင်ခြင်း ၊ မင်းပေးတဲ့တာဝန်ကို လက်တွေ့မှာ အခြားလူတွေကို အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်
ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့ သူတို့လုပ်ဆောင်မယ့် အနာဂတ်မှာ အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပိုကောင်းအောင်စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းသူတို့လေ့လာသင်နိုင်ပါတယ်။ အားကောင်းသောနည်းလမ်း မြင်ကွင်းဟာ မင်းပိုက်ဆံကမ်းလမ်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။
မင်းအဖွဲ့အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အခွင့်အရေးများ မင်းကမ်းလမ်းလိုက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ တာဝန်လွဲအပ်ခြင်း အရည်အချင်းတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုမှာ
အလုပ်သမားတစ်ယောက်မျော်လင့်ချက် သူတို့အလိုအလျောက် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ မင်းလက်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့အရာ
မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းလက်ထောက်တစ်ယောက်ကို တာဝန်လွှဲအပ်တဲ့အချိန်မှာ မင်းရဲ့အလုပ်ဝန် ၊ မင်းအဖွဲ့သားရဲ့
အရည်အချင်း ၊ ဖွဲ့ဖြိုးဖို့အတွက် လိုအပ်သောခွန်အား နှင့် ကြုံတွေ့နိုင်သော အန္ဒရာယ်များကို စမ်းစစ် ရမယ်လိမ်မည်။
အလုပ်တာဝန်လွှဲအပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အစိပ္ပါယ်က တစ်စုံတစ်ခုကို မင်းလက်ဆေးတဲ့သဘောအမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
အလုပ်တာဝန်လွဲအပ်ခြင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ဟာ လုပ်ငန်းမှာ မမြင်နိုင်သော နေရာမှာ ဆက်သွယ်ဖို့ ၊
အသေးစိတ်ထိန်းခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ နေရာတိုင်းမှာ အသေးစိတ်သင်နားလည်မယ်ဆိုလျင် အမှန်တကယ်
Why People Resist Delegating လူတွေက ဘာဖြစ်လို့တာဝန်လွဲပြောင်းလဲ
လုပ်ငန်းတစ်ခု သို့ အလုပ်တစ်ခုမှာ လက်ထောက် သို့ တာဝန်လွှဲအပ်မည့်ကိုယ်စားလှယ် မခန့်အပ်ဖို့ မလိုတာ
အကြောင်းအရာအများကြီးရှိတယ်။ အကြောင်းအရာများထဲမှာ တစ်ခုကတော့ သင်ကိုယ်တိုင်အလွယ်တစ်ကူ
စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်က မင်းတာဝန်ပေးမှ
ကိုယ်စားလှယ်လုပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ တက်တမ်းတိုအတွင်းမှာ မင်းကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ရင် မြန်ချင်မှ
မြန်လိမ်မယ်။ သို့သော် တစ်ခုမှာ မင်းအလုပ်သမားနဲ့ဆက်ဆံဖို့ နှင့် အချိန်ကုန်မှုနည်းအောင် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်
အခြားအကြောင်းအရာကတော့ အလုပ်တာဝန်လွှဲအပ်သော ကိုယ်စားလှယ်ကိုမကြိုက်ကြပါဘူး။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပြည့်စုံစွာအောင်မြင်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံးတာဝန်ကို ဆုံးရှုံးသွားမှာကို
ကြောက်တတ်ကြတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ အရည်အချင်းကို အကောင်းဆုံးအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ အကောင်းအဆုံးအချိန်ကိုအသုံးမပြုဘဲ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီကို
အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီအလုပ်များ ၊ မဟာဗျူဟာအားလုံးထိန်းချူပ်ခြင်း နှင့် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပုံဖော်ပြီး
မင်းတာဝန်ပေးနိုင်မှာပါ။ အလုပ်တစ်ခုချင်းစီ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ရေရှည်မှာ နားလည်မှုနဲ့အတူ ဆက်လုပ်နိုင်အောင် ဆန္ဒညီ
ဟန်ချက်ညီဖို့ လိုပါတယ်။ အကယ်၍ တာဝန်ပေးနိုင်မှုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီဆိုလျင် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့
ပိုအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။When delegating Does and Doesn’t Work ဘယ်အချိန်မှာ အလုပ်တာဝန်လွဲအပ်ခြင်း နှင့် မလွှဲအပ်ခြင်း
လုပ်ငန်းတစ်ခု တာဝန်လွဲအပ်နိုင်မနိုင် သင်မသိခင်မှာ လုပ်ငန်းအကြောင်းပုံစံ နှင့် အလုပ်တာဝန်လွဲအပ်ခြင်း
အန္ဒရယ်နိယာမများကို မေးခွန်းများစွာ စူးစမ်းချင်လိမ်မယ်။
•လုပ်ငန်းပြည့်စုံဖို့ လုပ်အပ်သောသတင်းအချက်အလက်တွေ အဖွဲ့အပေါ်မှာလုပ်မဲ့လူ တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိလား။•တစ်ဖန်အနာဂတ် လုပ်ငန်းတာဝန်မှာ လိုအပ်မည့်အလားအလာရှိသလား။•မင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းရည်တစ်ခုတိုးတက်ဖို့ အလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ကူညီနိုင်မလား။•အလုပ်တာဝန် ထိထိရောက်ရောက် အမိန့ပေးဖို့ မင်းမှာ အချိန်ရှိလား။ အသိဥာဏ်ပြောင်းလဲဖို့
၊မေးခွန်းများဖြေဆိုဖို့ ၊ တိုးတက်မှုကို စစ်ဆေးဖို့ နှင့် ဖြစ်နိုင်သလောက်အမှန်ကိုပြုပြင်ဖို့ မင်းအချိန်ရှိဖို့
လိုအပ်လိမ်မယ်။•လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အလုပ်တာဝန်ကို ငါစွမ်းဆောင်နိုင်လား။ ငါတာဝန်ယူထားသော အလုပ်တာဝန်ထဲမှာ
အန္တရာယ်များကို သက်ထောင့်သက်သာရှိရဲ့လား။ဒီအချက်များကိုကြည့်ပြီးနောက် အခြားတစ်ဖက် အကြောင်းပြချက်များပြန်ကြည့်မည်ဆိုလျင်
အခွင့်အဏာလွဲအပ်ခြင်း အလုပ်မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး။ ထိုပါသော အကြောင်းပြချက်ပြချက်များ
•အကယ်၍ ပထမလုပ်ပြီးတဲ့အလုပ် မမှန်ဘူးဆိုလျင် ပြန်လုပ်ဖို့ အချိန်မလုံလောက်တော့ဘူး။•ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ရခြင်းအပေါ်မှာ အလုပ်မပြည့်စုံခြင်းအတွက် အကျိုးဆက်များဟာ စွန်စားရတာ
မထိုက်တန်ဘူး။•ပထမအကြိမ်မှာ မြင့်မားသောအရည်အသွေးရလဒ် ရှိရမယ်။•ဒီလုပ်ငန်းထဲ အားနည်းချက်တစ်ခုကို လုပ်ငန်းပျက်ဆီးနိုင်သော အတိုင်းတာကို ဝေဖန်ရမယ်။To Whom? ဘယ်သူ့ကို
မင်းဘယ်သူ့ကို တာဝန်ခွဲယူ သင့်လဲ။ အလုပ်အတွက် လိုအပ်သောစွမ်းရည် နှင့် မင်းမှာ ရှိသော
၀န်ထမ်းအားလုံးအရည်အချင်းအပေါ်မှုတည်ပြီး အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အကောင်းဆုံး
လုပ်ချင်တယ်ဆိုလျင် အလုပ်နဲ့ လိုက်ဖက်သောလူတွေကို သင်ရွေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ အလုပ်အတွက်
တစ်ယောက်ထက်ပိုလိုမယ်ထင်လျင် အောက်မှာဖော်ပြထားသောအချက်အလက်တစ်ချို့ကို နောက်ဆုံး
ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ မင်းကိုကူညီမှာပါ။1. The individual’s level of experience, knowledge, skills, or ability to acquire new ones
Level တစ်ခုချင်းစီ၏ လိုအပ်သော အတွေ့အကြုံ ၊ အသိပညာ ၊ အရည်အချင်း သို့ စွမ်းရည် များ
•What ability does him or her posess?
သူ/မ ဘာအရည်အချင်းပိုင်ဆိုင်လဲ။•Is there time to get the person additional needed skills?
ထိုလူရတဲ့အချိန် နောက်ထပ် ဘာအရည်အချင်း လိုသေးလဲ။2. How does the individual like to work?
•Is he or she independent enough?
သူ/မ လုံလောက်သော လွတ်လပ်မှုရှိရဲ့လား။•Does this task align with his or her interests?
ဒီအလုပ် သူ/မ စိတ်ဝင်စားချိန်ညှိမှု ရှိ ရဲ့လား။•Will the new skill acquired align with his or her future work goals?
လိုအပ်သောအရည်အချင်းအတွက် သူ/မ အနာဂတ်အလုပ်ပန်းတိုင်အတွက် ကိုက်ညီမှုရှိရဲ့လား။3. How will I shift his or her existing work load?
လက်ရှိအလုပ်ဝန်ကနေ ရွေ့ရင် သူ/မ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။
•Does he or she have time for more work?
နောက်ထပ်အလုပ်အတွက် သူ/မ အချိန်ရှိသေးလား။•How will this affect the other team members?
အခြားအဖွဲ့ဝင်အပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိမလဲ။•Will it have any impact on meeting existing dealdlines?
လက်ရှိကြုံတွေ့ရသောအချက်အလက်ပေါ်မှာ တစ်စုံတစ်ခု အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလား။
မင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကို အလုပ်တာဝန်လွဲတဲ့အခါမှာ မင်းမျော်လင့်တာထက်ကြာမယ်လို့ ခံစားမိလိမ်မယ်။
အဲ့လိုခံစားချက်များကို သိမ်းသွင်းစည်းရုံးမှု ခွင့်မပြုစေချင်ဘူး။ ဌင်းဟာ မင်းကိုညံဖျင်းသောရွေးချယ်မှု
ဖြစ်စေတယ်။ အကယ်၍ အလုပ်နဲ့လိုက်ဖက် မှန်ကန်သောလူ ရွေးမယ်ဆိုလျင် အချိန်နဲ့အတူ သူတို့အရှိန်
အ၀ါ ပို၍တိုးတက်လိမ်မယ်။How to delegate successfully
အခု ဘယ်အလုပ်လုပ်က ဘယ်သ့က
ူို တာဝန်ပေးမလဲ မင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အလုပ်တာဝန်လွဲအပ်ရာမှာ
ပို၍တိကျအောင် မင်း လုပ်ဖို့ လိုသေးတယ်။ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အားလုံး ခွဲဝေတိုင်း သေချာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
ိုိုလုပ်ပိုင် အခွင့်အဏာပေးပါ။ ပေးသောအခွင့်အဏာ ဘယ်နေရာမှာ အဆုံးတတ်ရမလဲဆိုတာ ဘောင်ခတ်ပေးပါ။
အခြားသောအချက်အလက်များ တစ်ချို့ကို ဖုံးကွယ်ပြီး အလုပ်ပြည့်စုံအောင်မြင်စွာ အဖြစ်နိုင်ဆုံးဝန်ထမ်းကို ပေးရမယ်။
အောက်ပါ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်/အကြံအဥာဏ်များ တာဝန်လွဲအပ်ရန် မင်းကို ကောင်းမွန်စွာ
ကူညီမယ်နိုင်ပါလိမ်မယ်။1.Identify clearly for the person what the outcome what and results of the task should be. You
should be able to describe whatasuccessful result will look like in specific detail. For example, you
shouldn’t give the expectation ofareport. Instead, be as specific as you can. A 10-12 page report,
single space, answering questions A, B, & C, which includes the same sort of graphics as were
used in the similar report dated January of last year.
လူအတွက် ရှင်းလင်းစွာဖော်ထုတ်ရင် အလုပ်၏ရလဒ်များ ဘာထွက်လာသင့်လဲ။ ဘယ်လိုအောင်မြင်
ရလဒ်လဲဆိုတာ တိကျသောအသေးစိတ် ဖော်ပြသင့်တယ်။ ဥပမာ…အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် တိုးတက်မှုမှတ်တမ်း
တစ်ခုအတွက် မျော်လင့်ချက် မင်းပေးသင့်ပါဘူး။ ဌင်းအစား တိကျတာထက် တိကျအောင်မင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။2.Now give them the boundaries. How much authority do they have? To whom are they accountable
during this process? Be sure to identify for them.
အခုသူတို့ကို ဘောင်ခတ်ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ ဘယ်လောက် အခွင့်အာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလဲ။ ဒီအလုပ် ဘယ်သူ့ကို
ို တွက်အသေချာဖော်ထုတ်ရမယ်။•What types of decisions they can make on their own
ိုိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လဲ။•What types of decisions they must come to you for
ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး မင်းဆီလာသင့်သလဲ။•What information can be shared and what should be kept private
ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်ဝေမျှမလဲ။ ဘယ်လိုအချက်လက် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းသိမ်းသင့်လဲ။•Any budget authority or constraints, if applicable
အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရင် ဘယ်လိုဘတ်ဂျက်မဆို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မလဲ။•Any milestones at which they should check in with you before moving on
ိုပ်ငန်းထိန်ချုပ်မျိုး မင်းဆီမပြခင် သူတို့ ဘာစစ်ဆေးသင့်လဲ။•Any time expectations for those milestones and for the final project
လုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအတွက် နှင့် နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းအတွက် အချိန်မရွေး မျော်လင့်လို့ရလား။•Whom they can go to for support, information, or assistance
ဘယ်သူ့ ကို ထောက်ပံဖို့၊ သင်တင်းပေးဖို့ ၊ ကူညီဖို့အတွက် ဘယ်သူ့ဆီကို သူတို့ သွားနိုငမ
် လဲ။•Who else on the team will be assisting them?
အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာကော ကူညီမဲ့လူ ဘယ်သူရှိသေးလဲ။3. Make sure you are giving them the appropriate responsibility level for the authority level
that you have given them. In other words, you cannot hold them accountable for
something that you have not given them the authority to do. Remember that ultimate
accountability rests with you.
သူတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အဏာအဆင့်ပေးရင် သင့်လျော်သော တာဝန်ကိုပေးပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်
သူတို့ကို တစ်စုံတစ်ခု တာဝန်ခံဖို့အတွက် အခွင့်အဏာကိုပေးပြီး လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ တာဝန်ခံမှုက မင်းဘဲဆိုတာ သတိရပါ။4.Look for the person who is closet to the work that you want done, even if it means delegating toalower level
of the organization than you would have first considered. For example, if you want to writeafrequently asked
questions’ document on your product, who better to delegate the task to than the customer service
representative who has had the best sales record, customer service satistaction scores, or other obvious
demonstration of expertise in the subject matter?
ဲ နီးစပ်ဆုံးနေတဲ့လူ ရှာပါ။ အကယ်၍ အဖွဲ့ အနိမ့်အဆင့်ပေးမယ်ဆလ
ျိုင် မင်း အရင်ဦးဆုံး
စဉ်းစားပါ။ ဥပမာ- အကယ်၍ မင်းရဲ့ထုတ်ကုန် အပေါ်မှာ စာရွက်စာမ်း ခဏဏမေးတဲ့ မေးခွန်းကိုရေးဖုိ့ ဘယ်သ့က
ပိုကောင်းမလဲ ၊ ဖောက်သည် service ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ဖို့ ဈေးရောင်းမှတ်တမ်းမှာ အကောင်းဆုံးဘယ်သူရှိမလဲ၊
ဖောက်သည်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးခြင်း သို့ အခြားထင်ရှားပေါ်လွင် ကျွမ်းကျင်မှုပြခြင်း စသည်ဖြင့် သူ့နေရာနဲ့သူ
အလုပ်တာဝန်ပေးဖို့လိုတယ်။5. Establishameans and schedule of communicating that ensures that you are available for
questions and troubleshooting. Make sure you treat that set aside time as if it is a
scheduled appointment you must keep. This lets you monitor progress and identify any
corrections that are needed before the person is way off target.
မင်းရနိုင်သော မေးခွန်းများ နှင့် ပြသာနာဖြေရှင်းဖို့အတွက် သေချာသောဆက်သွယ်ခြင်း၏
နည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်အစီအစဉ် တစ်ခု တည်ဆောက်ရမယ်။ ပိုသောအချိန်ကို အသေချာအသုံးပြုပါ။
အကယ်၍ အစီအစဉ်ဖြင့် ချိန်းတွေ့မှု တစ်စုံတစ်ခုရှိရင် မင်းထိန်းသိမ်းသင့်တယ်။ ဒီဟာတွေက
မင်းပို၍တိကျအောင်ဖော်ထုတ်ခြင်း အားဖြင့် မင်းရဲ့တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်ခွင့် ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအရာများဟာ အရင်လူက ပစ်မှတ်ကို ကင်းကွာပြီး လိုအပ်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။6. Monitor against agreed upon timelines, deadlines and milestones. This has you focus on
results rather than the way those results are achieved. In other words, let them do the
work their way as long as they are producing satisfactory results inatimely manner.
သဘောတူမှုနဲ့ ဆန်ကျင်သော လူပ်ရှားမှုများ ၊ ကန့်သတ်သောအချိန်များ နှင့်
အရေးကြီးသောအချက်များ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဒီအချက်အလက်အပေါ်မင်းစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ရလဒ်က
ရယူခဲ့တဲ့ရလဒ်ထက်သာပါတယ်။ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုထဲမှာ လက်သင့်ခံနိုင်သောရလဒ်များ
သူတို့အားထုတ်နေမယ်ဆိုလျင် သူတို့လုပ်တဲ့နည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါ။7. Focus on fostering motivation. Let the person know what additional opportunities might
become available if the complete the task successfully. Will there be financial rewards?
Public recognition? Shard credit?
အချက်အလက်ပေါ်မှာ ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက် နိုးဆော်ခြင်း။ အကယ်၍ တစ်ခုလုံးအောင်မြင်လျင်
ဘာအခွင့်အလမ်းများ နောက်ထပ်ထည့်လို့ ရနိုင်သလဲဆိုတာ လူတွေကိုသိခွင့်ပြု လိုက်ပါတယ်။
ထိုအရာ၌ ငွေရေးကြေးရေးဆုလဒ်လား။ အများပြည်သူ အသိအမှတ်ပြုခြင်းလား။ အသိအမှတ်ပြုဖို့
ဝေမျှသလား။8. Expect the person to propose solutions to any problems that they to you. This prevents
them from passing the project back to you and keeps them involved and responsible.
အဆိုပြုဖို့ ၊ ဘယ်ပြဿနာမဆို ဖြေရှင်းဖို့ လူတွေက မင်းဆီသယ်ဆောင်လာမယ်လို့ မျော်လင့်တယ်။
ဒီပြဿနာဟာ သူတို့ကိုကာကွယ်တယ်။ လုပ်ငန်းဆီမှာ မင်းဆီသို့
9. Be centain to inform other team members of the authority that you have given to the
person you are delegating to, and to share this information with any relevant
stakeholders in other divisions or departments of the company or to anyone else affected
by the decision to delegate.
ကုမ္မဏီနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနများ လူတွေကိုတာဝန်ပေးဖို့ ၊သတင်းအချက်အလက်တွေကို မျှဝေဖို့ ၊
လူတိုင်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့် တာဝန်ပေးဖို့ နှင့် အခြားလူ အဖွဲ့သားတွေကို
တာဝန်ခွဲဝေပေးတဲ့အခါမှာ သေချာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။မင်းရဲ့အသင်းအဖွဲ့ကို အလုပ်တာဝန်ပေးခွဲဖို့ အတွေ့အကြုံ ပိုရှိသကဲ့သို့ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီ လွယ်စွာ
တာဝန်ပေးလို့ရအောင် နောက်ထပ်ခေါင်းစည်းများ လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်။ အဖွဲ့မှာ မင်းဆက်ဦးဆောင်မယ်ဆိုလျင်အဖွဲ့သားတစ်ဦးချင်း ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ မင်းပုံဖော်နိုင်လိမ်မယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့
သတိပြုရမကတော့ အသင်းအဖွဲ့အရည်အချင်းတိုးတက်ဖို့ ကူညီတာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ဒီလိုတူတဲ့အလုပ်လာရင်
ကူညီလို့အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် အသင်းအဖွဲ့အနာဂတ်မှာ နောက်ထပ်တာဝန်များကို
ပို၍ကောင်းသောအသုံးအဆောင် ကူညီရန် ဖြစ်ပါတယ်။Moentoring others အခြားလူတွေကို ကောင်းရာညွန်ပြခြင်း သို့ အကြံပေးခြင်း
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူတို့အသင်းသား သို့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဘယ်လိုအောင်မြင်လဲဆိုတာ
အတိုင်းတာတစ်ခုနားလည်တယ်။ မင်း၏အဖွဲ့အရည်အချင်း ၊စွမ်ရည်များ နှင့် အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်
တစ်ပိုင်းတစ်ဒေသ ပေါင်းစပ်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ပေးပါ။ သူတိုရှင်သန်မှု ကူညီခြင်း ၊ သူတို့တိုးတက်အောင် ကူညီခြင်း
နှင့် နောက်လာမယ့်အလုပ် သို့ မင်းလုပ်နေတဲ့အခန်း ကဏ္ဍအားလုံး သူတို့လုပ်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပေး၍ ကူညီပါ။
မင်းရဲ့ညွန်ကြားခြင်းအောက် ခေါင်းဆာင်တက်တမ်းကာလမှာ ကျနော်တို့ဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နိုင် ပါတယ်။
မင်းရဲ့အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာ အကြံပေးခြင်းဆိုတာ တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ သို့သော်အဖွဲ့သားများ အတွက်ကန့်သတ်မှုမရှိပါဘူး။ မင်းမှာရှိသော အတွေ့အကြုံ ၊ အသိပညာ၊ အရည်အချင်း နှင့် စွမ်းရည်များကို
ဘယ်ဘ၀နယ်ပယ်မဆို မင်းအကြံပေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မင်းကိုယ်ပိုင်
တိုးတက်ဖို့အခြားနည်းလမ်းဝင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြံပေး သို့ ကောင်းရာညွန်ပြသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
What is mentoring? အကြံပေးခြင်းကဘာလဲ။
အကြံပေးခြင်းဆိုတဲ့အစိပ္ပါယ်က ကိုယ်ပိုင်အရေး နှင့် စွမ်းကျင်မှုအဆင့် နှစ်ခုစလုံးတိုးတက်ဖို့ အပြန်လှန် ပန်းတိုင် နှင့်
လူနှစ်ဦးကြား ဆက်သွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ရာထူးကြီးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး
အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသော လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြံပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ
အသိပညာ၊အရည်အချင်များ၊ကျွမ်းကျင်မှု၊အတွေ့အကြုံ နှင့်စွမ်းရည်များ တိုးတက်ချင်သော လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ ညွန်ပြမှု အခန်းကဏ္ဍမှာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာ အခြေခံကျလားမကျဘူးလား။ အခြေခံသဘောအရ
အကြံလိုချင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဟာ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဆီကျော်ပြီး ဆက်ဆံခွင့်မရှိပါဘူး။ ထိုစနစ်ဟာ
ှုိုးတက်ဖို့ အတွက် သဘာဝကျသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ အကြံပေးဖို့လိုအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို သူတို့အသိပညာများဝေမျှခြင်း နှင့်
ိုအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြုံတွေ့ရသော ပြဿနာအခြေအနေပေါ်မှာ အကြေံပေးခြင်း ၊အကြံပေးဖိုအပ်သော သူ/မ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနာဂတ်ကို ချီတက်နိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြံပေးခြင်းဟာ အဖွဲ့နှစ်ခုစလုံး အတွက် အကျိုးမြောက်များစွာ ရှိတယ်။ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အောင်မြင်ပြီးသော
တစ်စုံတစ်ယောက် နယ်ပယ်ကနေ သင်ကြားခြင်း နှင့် ပုဂ္ဂိုလရေးနည်းပြဘက်မကော အလုံးအမြတ်ရတယ်။
အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် လိုအပ်သော လူတစ်ယောက်ဟာ အလုပ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဆက်သွားရမလဲ ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေ သို့
အခက်အခဲ၊ မသေချာတာတွေကြုံတွေ့ နိုင်တယ်။ အကြံပေး အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့
ဆုချီးမြင့်ခြင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာကော ၊ အကြံပေးအတွေ့အကြုံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်နေရာမကော
မင်းရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အောင်မြင်မှုကျေးဇူးတွေ့ရလိမ်မည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စွမ်းကျင်မှုအဆင့်မှာ အကျိုးအမြတ်
ကောင်းကောင်းရှိပါတယ်။ မင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု တိုးတက်ခြင်းစွမ်းရည် ၊ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ပန်းတိုင်ကို
ဘယ်လိုရောက်နိုင်မလဲဆိုတာ ပို၍နားလည်လာအောင် အကြံပေးခြင်းကနေတဆင့် သင်ရနိုင်ပါတယ်။
မင်းရဲ့အကြံပေးဂ္ဂိုလ်နေရာမှာ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနဲ့အတူ ၊ပြဿနာဟောင်းမှာ ကြုံခဲ့တာတွေ အခုရှုထောင့်အသစ်မှာ
မင်းရနိုင်တယ်။ အရင်ကမင်းမစဉ်းစားခဲ့မိတာကို နည်းလမ်းအသစ်ဖြင့် ကိုင်တွယ်လို့ရပါပြီ။What to consider before mentoring (အကြံမပေးခင်ဘာကို စဉ်းစားသင့်လဲ)
အကြံပေးခြင်းဟာ မင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေတယ်။ သို့သော် အကြံပေးခြင်း
ဆက်ဆံမှုအမျိုးအစားအလိုက် မလုပ်ခင်မှာ မင်းသေချာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အကြံပေးတာဝန်ယူခြင်းဟာ
အချိန်အတော်ပေးရတယ်။ အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အဆင့်မှာ တာဝန်ပေးခံရတယ်။
မင်းအကြံပေးခေါင်းဆောင်မှု စတင်မဖြစ်ခင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းမေးပါ။
•အကြံပေးဖို့လိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်၏ လိုအပ်ချက် အ့ဝင်ဂွင်ကျဖို့အတွက် မင်းမှာသေချာသောအရည်အချင်းရှိလား။•အကြံပေးဖို့အလိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်၏ စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်မှု သို့ လိုချင်သောအသိပညာ ၊အကြံပေးခြင်းထက်ပိုအကျိုးတက်ရောက်မှု နှင့်
ပို၍အရည်အချင်းရမြန်အောင် အခြားနည်းလမ်းအလားအလာရှိးလား။•မင်းအတွက်အသုံးပြုကောင်းမဲ့အချိန်ရှိလား။ မင်းရဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ပုံမှန်အချိန်တစ်ခုပေါ်မှာ အချိန်ရင်းနီးမြုပ်နံဖို့ သေချာရှိပြီးလား။•ဒီဟာတွေက မင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ အကျိုးအမြတ်နဲ့ ဘယ်လိုဆက်နွယ်လဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့လား။ နှစ်ရှည်အစီအစဉ်အတွက်
မင်းကျေနှပ်မှု အကျိုးအမြတ်လုံလောက်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်လို့လား။•ဆက်နွယ်မှုအပေါ်မှာ ဘာဘောင်များ ခတ်ထားဖု့လ
ိုလဲ။ အကြံပေးပုဂ္ဂို လိုအပ်သော စိတ်ဆန္ဒအားထက်တန်မှု မရှိနေတဲ့အထဲမှာ
ဌင်းနယ်ပယ်ဟာ မင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလား သို့ အတွေ့အကြုံလား။ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့် လုပ်ဖို့ပြတ်သားမှုရှိပြီးလား။ထိုမေးခွန်းများ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကော ၊ အကြံပေးဖို့လိုအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါ နှစ်ခုစလုံးဆက်နွယ်
အကျုံးဝင်ပါတယ်။ အကယ်၍ မင်း သီးခြားသော အကြံအဥာဏ်ရှိမယ်ဆိုလျင် မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
အချိန်ဘယ်လောက်ပေးကမ်းရမလဲ။ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာ ဆက်လက် ဆက်ဆန
ုိံင်မလဲ။ ဆက်ဆံမှု ပြီးဆုံးသွားရင်
နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်ပျက်သွားမလား သို့မဟုတ် တစ်ယောက်တည်းလား။
Structuring Your Mentoring Relationship မင်းရဲ့အကြံပေးခြင်းဆက်နွယ်ပုံစံ
အကယ်၍ မင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အကြံပေးခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုလျင် မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်လူ့အရင်းအမြစ်ဌာနမှာ
အလိုလိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ပါပြီး။ လိုအပ်သော တိုးတက်မှုပြသနိုင်ဖို့အတွက် တစ်နှစ် သို့မဟုတ် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်
လုပ်ဆောင်ရပါလိမ်မယ်။ အခြားအခြေအနေကတော့ အကြံပေးခြင်းအတွက် စနစ်ကျမှုရှိချင်မှ ရှိမယ်။ ကိုယ့်ပုံစံ စနစ်နဲ့မင်းအသင်းအဖွဲ့ရဲ့ လိုအပ်မှုအတွက် ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စများဟာ အောက်ပါအချက်အလက် များ အကြံပေးခြင်း
အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်မင်းကိုကူညီလိမ်မယ်။ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်နှင့်သက်ထောင့်သက်သာ ရှေ့ဆက် သွား
နိုင်အောင် နှစ်ခုစလုံးမင်းကိုကူညီလိမ်မယ်။
Formality: will you haveaforma, structured relationship with specific goals and topics to be covered.
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်: တိကျသောပန်းတိုင် နှင့် အကာအကွယ်ဖြစ်မယ် ခေါင်းစည်းများ ဆက်သွယ်မှု တည်ဆောက်ဖို့
Frequency: How often are you going to be in contact with each other? You both need to be in agreement
about the amount of time you can devote to the relationship. You’ll want to agree on:
ကြိမ်နှုန်း။။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မကြာခဏ ဘယ်လိုဆက်ဆံကြ မလဲ။ မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးသဘောတူထားသောအချိန်၏ ပမာဏအတွက် ဆက်ဆံဖို့ ရင်းနီးမြူပ်နိုင်မလား။ မင်းဆက်လက် သဘောတူနိုင်မလား။
Whether or not you will be available between meetings
တွေ့ဆုံမှုအကြား ယုံကြည်မှု ရှိလား မရှိဘူးလား။
Method: will you meet face-to-face? What about by phone or by email? Who is responsible for initiating
each contact? If you are using email or telephone, what is the expected length of time for initiating each
contact? If you are using email or telephone, what is the expected lenghth of time for responding?
နည်းလမ်း။။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မျက်နာချင်းဆိုင်တွေ့မလား။ မင်းဖုန်း သို့ အီးမေးလ် နဲ့ကော ဘယ်လိုလဲ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်ဆံ အစပျိုးဖို့ အတွက် ဘယ်သူတာဝန်ရှိလဲ။ အကယ်၍ အီးမေးလ် သို့ မဟုတ်
တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ကြမည်ဆိုလျင် အချိန်ဘယ်လောက်အစပျိုးဖို့မျော်လင့်လဲ။ အကယ်၍ အီးမေးလ် သို့
ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုလျင် တုံပြန်မှုအတွက် ဘယ်လောက်ကြာမယ် မျော်လင့်လဲ။Duration: How long will your relationship last? Will you agree to aspecific time frame and corresponding
number of meetings, or to the accomplishment of specific goals, no matter how long that takes? Will you
have regular, formal reviews of the relationship in order to determine whether or not to continue, or will
you just keep meeting as long as you both feel that it’s beneficial?
ကြာမြင့်သောအချိန်။။ ဘယ်လောက်ကြာကြာဆက်ဆံကြမလဲ။ လိုက်လျော တွေ့ဆုံခြင်းအရေအတွက် သို့မဟုတ်တိကျသောပန်းတိုင် ပြီးမြောက်ဖို့ ၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကိစ္စမရှိဘူးလား ၊တိကျသောအချိန်ဘောင်ခတ်ဖို့အတွက်
မင်းသဘောတူနိုင်မလား။ မင်းပုံမှန်အချိန်ရှိလား။ ဆက်ဆံခြင်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ နည်းလမ်းတကျ
ဆက်လက်လုပ်နိုင်မလား မလုပ်နိုင်ဘူးလား။ သို့ မင်းတို့နှစ်အကျိုးခံစား နိုင်သလောက်ဘဲ ထိန်းသိမ်းမလား။
Confidentiality: what level of information and details can you share? You might need to agree that you
will not share specific examples, but will only be able to speak in generalities.
လျှို့ဝှက်ခြင်း။။ သင်တင်းအချက်အလက် နှင့်အသေးစိတ် ဘယ်အဆင့်ထိ ဝေမျှမလဲ။ အရေးကြီးသောအချက်အလက်တစ်ချို့ကို မဝေမျှဖို့ မင်းဘာတူနိုင်တယ်။ သို့သော် အကြမ်းဖျင်းသဘော လောက်ဘဲပြောနိုင်သလား။
စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ပထမဆက်ဆံခြင်းဦးဆုံးတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့သားတစ်ဦးချင်းစီသေချာသောလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တူညီသောအခွင့်အရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနည်းငယ်ပြည့်စွက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်မင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။သို့သော်လည်းဘဲ အလုပ်သမားများ သူတို့တိုးတက်မှု အတွက် အချိန်ပို ရင်းနီးမြုပ်နံခြင်းကို မင်းကြိုက်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မင်းရဲ့အကြံပေးခြင်းဟာမင်းအကြံပေးခြင်းဆက်ဆံမှုပြီးနောက်
လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလား။အလုပ်သမားများအပေါ်မှာအကြံပေးလိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းလုပ်တဲ့အလုပ်အမျိုးအစားအပေါ်နှင့်ဘာအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလဲ။တိုင်းတန်းခြင်း၂၀%အကြံပေးဖို့လိုအပ်သောလျော့မှုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပန်းတိုင်အမျိုးအစားအပေါ် မှုတည်ပြီးတော့ တိုင်းတာရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် မင်းလုပ်နေတာကို ဘယ်ဟာက
အလုပ်လုပ်သလဲဘယ်ဟာကမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ထဲမှာအလုပ်မလုပ်သလဲဆိုတာမင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်များကိုမျှဝေပေးနိုင်မည်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနိုင်ရန်မင်းတိုင်တာနိုင်မှာပါ။အကျိုးတက်ရောက်မှုတစ်စုံတစ်ခုAll pages:12345678910111213141516171819212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556InfoSaveLikeShareDownloadMoreLeadership Skills Published on Jan 30, 2012 နိဒါန်း 2.3.2 Consistency 2. Three traits every successful leader must have 1.2 A born leader 2.1 The Desire to lead 1.1What are leadership...See Morepeter.issuuFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore